NYI LYNN SECK 18+ DEN: May 2006
အဆိုတှော လေးဖြူရဲ့ တကဿကသိုလ် ကျောင်းသားဘဝ ဖြတ်သန်းပုံ အချို့တဝက်ကို သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ စာရေးဆရာ ပှေါဦးသစ်က ရေးထားတာပါ။ ဖတ်ရတာ ကောင်းပါတယ်။ လေးဖြူရဲ့ အယူအဆ တစ်ချို့နဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား တစ်ချို့ကို တွေ့မြင် နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်အဝေးမှာ ရောက်နေတဲ့ စာအုပ် ဝယ်ယူဖို့ ခက်ခဲသူများအတွက် တင်ထားပေးတာပါ။ စာရေးသူ အကျိုးပျက်စီးအောင် စီးပွားဖြစ် ပြန်လည် မဖြန့်ဖြူးကြဖို့ မေတဿတာ ရပ်ခံလိုပါတယ်။ မြန်မာပြည်က စာရေးသူ အများစုဟာ ပိုက်ဆံ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝသူများ မဟုတ်ကြဘူးဆိုတာ အမှတ်ရစေ လိုပါတယ်။
Attention: only for my closed friend.
Download Lay Phyu Ebook Here [ Download ]
Password [ as me personally ]
Tags: Lay Phyu, Lay Phyu Ebook, Myanmar Ebook, Nyi Lynn Seck, လေးဖြူ
Posted by NLS at 5/31/2006 04:25:00 PM 1 comment Links to this post
ကိုယ့်ဖိုင်တွေကို Zip လို ၊ RAR ဖိုင်လို ချုံ့ဖို့အတွက် ပရိုဂရမ် အထူးတလည် သွင်းစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ အွန်လိုင်းကနေ ချုံ့လို့ ရပါပြီ။ ဘာအတွက် ကောင်းလဲဆိုရင် အွန်လိုင်းကို ဆိုင်ဘာကဖေးများမှာ သုံးသူများအတွက် အလွန်တရာကို အဆင်ပြေ လှပါတယ်ဗျား။ ပရိုဂရမ်ကို သွားပြီး ဒေါင်းလုဒ် လုပ်နေစရာ မလိုသလို အင်စတောလ် လုပ်စရာ မလိုတဲ့အတွက်ဘဲ ဒီနေနရာမှာ တိုက်ရိုက် ချုံ့နိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး အကောင့်တစ်ခု လုပ်ရပါမယ်။ အကောင့်တစ်ခု လုပ်ပြီးရင် အီးမေးလ် အတက်ရ်ှမန့် အနေနဲ့ ပို့ပေးနိုင်သလို၊ လင့်ခ်ကို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်း ၂၄ နာရီကြာ ဖိုင်ကို သိမ်းထားပေးပါတယ်။ လူတိုင်း မှတ်သားထားသင့်တဲ့ အသုံးဝင်သော ဆိုဒ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။
Website Here [ Click ]
Posted by NLS at 5/31/2006 04:13:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 5/31/2006 10:23:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 5/31/2006 10:19:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 5/31/2006 10:09:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 5/30/2006 12:02:00 PM0comments Links to this post
ဒီတစ်ခေါက် ခရီးသွားရင်းနဲ့ Dan Brown ရဲ့ စာအုပ် နှစ်အုပ် ဖတ်ဖြစ်တယ်။ The Davinci Code နဲ့ Angels and Demons ပါ။ နှစ်အုပ်စလုံး အတှောလေး ကောင်းပါတယ်။
ဒါဗင်ချီကုဒ်က ခရိယာန် ဘာသာမှာ အငြင်းပွားနေတဲ့ ယေရှု ခရစ်တှောဟာ တပည့်မဖြစ်သူ Mary Magdalene နဲ့ တိတ်တဆိတ် လက်ထပ်ပြီး ခလေးလေး တစ်ယောက် ရခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို ကျောရိုးထားပြီး ဇာတ်အိမ် ဖွဲ့ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လိုက်ဟာ ဟားဘာဒ် တကဿကသိုလ်က သကေဿငတနဲ့ နိမိတ်ပုံ ပရှောဖက်ဆာ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကို ဖတ်နေရင်းနဲ့ ဒီဇာတ်လိုက်ဟာ အခု ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးတဲ့ မင်းသား တွမ်ဟန့်ခ် နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံး ဆိုတာ ခံစားလို့ ရလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းကို ဖတ်တဲ့အခါ ရီနေဆွန့် ခေတ်ရဲ့ နာမည်ကြီး ပန်ချီဆရာကြီး လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီရဲ့ ပန်းချီကားများကို ရင်းနှီးထားမယ်ဆိုရင် ပိုပြီး အသက်ဝင်ပါတယ်။ လူဆိုး ဘယ်သူလဲ ဆိုတာကို မမှန်းဆ နိုင်လောက်အောင် စာရေးသူဟာ ဝှက်ထားနိုင်ခဲ့တယ်။ အဓိကကတော့ လီယိုနာဒိုရဲ့ ခရစ်တှောရဲ့ နောက်ဆုံးညစာ (The Last Supper) ဆိုတဲ့ ပန်းချီကားမှာ ခရစ်တှောဘေးက ထိုင်နေသူဟာ တပည့်ယောက်ျား မဟုတ်ဘဲ မိန်းမဆိုတဲ့ အချက်ရယ်ရယ် ၊ The Gnostic Gospels ထဲက ကျမ်းစာမှာ မပါခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ အချက်တွေရယ်ကို အခြေခံထားပြီး Holy Grail ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖှောထုတ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။ Anagram ဆိုတဲ့ အဂဿငလိပ်စာ စာလုံး အလှည့်အပြောင်း ကစားခြင်း ဂိမ်းကို ဆော့ဖူးသူများအတွက်လည်း ပိုပြီး နားလည် လွယ်ပါလိမ့်မယ်။ Non Stop Action အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ အလှည့်အပြောင်း တွေလည်း အများကြီး ပါပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ပြီးသွားရင် စာဖတ်သူတိုင်း အတွေးအမြင်တစ်ချို့ ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ပန်းချီကားတွေကို ကြည့်တဲ့ အမြင်၊ သမိုင်းဆိုတာကို ကြည့်တဲ့ အမြင် အနည်းငယ် ပြောင်းသွားနိုင်တယ်။ တိုးတက် လာနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တှော နှစ်သက်မိတဲ့ စာလေး တစ်ပိုဒ် ပါပါတယ်။
History is always written by the winners. When two cultures clash, the loser is obliterated, and the winner writes the history books - books which glorify their own cause and disparage the conquered foe. History is alwaysaone-sided account
ကျွန်တှော့အတွက်တော့ အတှောလေး အဓိပဿပာယ် ရှိလှပါတယ်။ ဒီဝတ်ထုကို ဖတ်ပြီးချိန်မှာတော့ နောက်ထပ် စာအုပ်ထဲမှာ မပါတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခု ခေါင်းထဲ ရောက်လာပါတယ်။ ဒါကတော့ မိုက်ကယ်လ် အိန်ဂျလိုရဲ့ ပန်းပု ရုပ်ထု တစ်ခုပါ။ Pieta လို့ ခှေါပါတယ်။ အဲဒီ ရုပ်ထုဟာ မယ်တှော မာရီကနေ ခရစ်တှောကို ပွေ့ထားတဲ့ ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပုံဟာ Michelangelo ရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး ရုပ်ထု တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံမှာ ခရစ်တှောရဲ့ မိခင် မျက်နှာဟာ လွန်စွာမှ နုဖတ်နေတာပါပဲ။ ကျွန်တှောဟာ ပထမဆုံး ဒီပုံကို စတွေ့ဖူးကတည်းက ဒီမေးခွန်းကို ဆရာများထံ မေးမိတယ်။ ထူးခြားတဲ့ အဖြေမရခဲ့ဘူး။ မယ်တှော မာရီဟာ အပျိုစင်မို့လို့ ဒီလောက် နုပျိုနေတာလို့ ဖြေကြပါတယ်။ အချို့ကလည်း မိုက်ကယ်လ် အိန်ဂျလို ကိုယ်တိုင် ဒီလို အယူအဆ ရှိခဲ့တာမို့ ပှေါလွင်အောင် ထုထားခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ အခု ဒီစာအုပ် ဖတ်အပြီးမှာတော့ ကျွန်တှော့စိတ်ထဲ ဒီ Mary ဟာ ခရစ်တှောရဲ့ မိခင်ကို ပြောချင်တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် Mary Magdalene ကို လျှို့ဝှက်ပြီး ထုလုပ်ထားတာလား ဆိုတာ သံသယ ဖြစ်လာရပါတယ်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ မိုက်ကယ်လ် အိန်ဂျလိုဟာလည်း လီယိုနာဒိုနဲ့ မရှေးမနှောင်း ပှေါခဲ့တဲ့ ရီနေဆွန့်ခေတ်ရဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ဦး မို့လို့ပါပဲ။ နောက်ပြီး Mary ဆိုတဲ့ နာမည်ချင်းကလည်း တူနေလို့ပါပဲ။
စာအုပ်ကို ဖတ်ကြည့်ပါလို့သာ အကြံပေးပါရစေခင်ဗျား။ တကယ်ကို ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ စာအုပ်ပါ။ လက်က မချချင်လောက်အောင် ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာ အာမခံလိုက်ပါတယ်။
Posted by NLS at 5/30/2006 01:22:00 AM0comments Links to this post
Tags : K Zaw Poem , ခင်
Posted by NLS at 5/30/2006 01:00:00 AM0comments Links to this post
မမျှောလင့်ဘဲ တိဘက် ဒလိုင်းလားမားကြီး နေထိုင်တဲ့ Himachal Pradesh ပြည်နယ်ထဲက McLeod Ganj ဆိုတဲ့ တောင်ပှေါ မြို့လေးကို အလည်ရောက် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီမြို့လေးဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ကလောမြို့လေးလိုပဲ ထင်းရူးတောတွေ ကြားထဲမှာ တည်နေတဲ့ မြို့ငယ်လေး တစ်မြို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တိဘက်လူမျိုးတွေ အများဆုံး နေထိုင်ကြတယ်။
တရုတ်ပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီက ယခင် တိဘက် လာဆာမြို့တှောဟောင်းကို သိမ်းပိုက်ပြီး လာမားရဟန်းတှော များနဲ့ ပြည်သူလူထုကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့ အခါ ဒလိုင်းလာမားဟာ အိနဿဒိယဘက်ကို ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အိနဿဒိယ ဝန်ကြီးချုပ် နေရူးကနေ ဒလိုင်းလားမားကြီးနဲ့ တိဘက်နွယ်ဖွားတွေကို ဒီဒေသလေးမှာ ခိုလှုံခွင့် ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Little Lasa လို့လည်း သူတို့ ခှေါကြပါတယ်။
မက်ခ်လော့ မြို့လေးဟာ ပင်လယ်ရေပြင်အထက် ပေပေါင်း ၅၅၀၀ ကျှောမှာ တည်နေပါတယ်။ အရှေ့ဘက် နဲ့ မြောက်ဘက်မှာ တောင်တန်းတွေနဲ့ ကာဆီးထားတယ်။ ဟိမဝနဿတာ တောင်တန်းကြီး အစပြုရာ နေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကမဿဘာလှည့် ခရီးသွားများနဲ့ ပြည့်နေပါတယ်။ တောင်လာတက်သူများ၊ ယဉ်ကျေးမှု လာရောက် လေ့လာသူများနဲ့လည်း ပြည့်နေပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ လနဲ့ချီပြီး လာရောက်နေထိုင်သူတွေ များပါတယ်။ တချို့ကလည်း တရားစခန်းတွေ ဝင်ကြတယ်။ တချို့ကလည်း အဲဒီနားက Triund ဆိုတဲ့ တောင်ကို လာတက်ကြတာပါ။ အဲဒီတောင်က ပေပေါင်း ၁၁၀၀၀ နီးပါး မြင့်ပါတယ်။ တောင်ဟာ မတ်စောက်တာကြောင့် ကွေ့ပတ် တက်ကြရပါတယ်။ အဲဒီတောင်ပှေါ ရောက်ရင်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်က နှင်းတောင်တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်တွေ့ကြ ရပါတယ်။
အဲဒီ ဒေသရဲ့ ယေဘုယျ ရာသီဥတုဟာ အေးမြနေပြီး နေထိုင်လို့ အတှောလေး ကောင်းပါတယ်။ မိသားစုလိုက် သွားရောက်နေထိုင်မယ် ဆိုရင်လည်း မီးဖိုချောင် ရေချိုးခန်း တစ်ပါတည်း ပါဝင်တဲ့ အခန်းလေးတွေကို သက်သက်သာသာ ငှားနေနိုင်ပါတယ်။ အစားအသောက် အနေနဲ့ကတော့ သစ်သီးဝလံများနဲ့ ကြက်သား ဆိတ်သား အများဆုံး ရနိုင်ပါတယ်။ တနဂဿငနွေ နေ့တွေမှာတော့ ဒေသခံတွေဟာ သက်သက်လွတ် စားလေ့ ရှိကြတယ်။ အဲဒီနေ့မှာ လာမားကြီးရဲ့ ကျောင်းတိုက်မှာ လာမားရဟန်းတှောတွေဟာ တရားစာများ စုပေါင်း ရွတ်ဖတ်တတ်ကြပါတယ်။ အဲလိုနေ့မျိုးဆို ကျောင်းဝန်းကြီး တစ်ခုလုံး လူတွေ ပြည့်နှက်နေတာပါပဲ။ အသေးစိတ်ကိုတော့ နောက်ရက်ကျမှ ထပ်မံ ရေးသား ပါဦးမယ်။
အိနဿဒိယကို အလည်လာမယ် ဆိုရင်ဖြင့် ဒီနေရာလေးဟာ မဖြစ်မနေ သွားရောက် လည်ပတ် သင့်တဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာ လက်ဆင့်ကမ်း လိုက်ရကြောင်းပါ ခင်ဗျား။
Tags : McLeod Ganj , Diary
Posted by NLS at 5/30/2006 12:17:00 AM0comments Links to this post
This Blog and all of my connections will be off till to 21 May, for switching over to another ISP. See you all back after that. Bye!!
ဒီနေ့ နေ့လည်ကစပြီး အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင် အသစ်ပြောင်းလဲရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ၃ ရက်ခန့် ရပ်နားထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းများ၊ ဆက်သွယ်လိုသူများ၊ အကြွေးတောင်းရန် ရှိသူများအားလုံး အဲဒီနောက်မှ ပြန်လည်ဆက်သွယ် လာရောက် လည်ပတ်ကြပါလို့ အသိပေးအပ်ပါတယ် ခင်ဗျား။
Posted by NLS at 5/18/2006 06:17:00 AM0comments Links to this post
နောက်ဆုံးတော့ ယူအီးအဖ်အေ ချံပီယံ ဆုဖလားကြီးကို ဘာစီလိုနာက သိမ်းပိုက်သွားပါတယ်။ ပွဲစတာနဲ့ ဂန်းနားတွေဟာ အတှောလေး ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပထမပိုင်း မိနစ်အနည်းငယ်မှာပဲ လျှပ်စစ်လို လျှင်မြန်တဲ့ အီးတိုးဆီ ဘောလုံး ရောက်သွားတာကို အာဆင်နယ် ဂိုးသမား လေမန်း လှမ်းဖမ်းတာ မမိလိုက်လို့ အီးတိုးရဲ့ ခြေထောက်ကို ဖမ်းဆွဲလိုက်တဲ့ အတွက် ဒိုင်က အနီကတ်ပြပြီး လေမန်းကို ထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အပြစ်မဲ့သူ ရောဘတ်ပီရက်စ်တစ်ယောက် လွန်စွာ မခံချိ မခံသာနဲ့ လူစားအတွက် ထွက်ပေးလိုက် ရပါတော့တယ်။ ဒိုင်က ပြစ်ဒဏ်ဘော သတ်မှတ်ပေးတာကို ရှောနယ်ဒင်ဟို ကန်တာ မဝင်ဘူး။ မရှေးမနှောင်းမှာဘဲ ဂန်းနားတွေ ပြစ်ဒဏ်ဘော ရပါတယ်။ အွန်နရီ ကန်တင်လိုက်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ဘောကို နောက်ခံလူ ဆိုးလ်ကင်းဘဲလ် ခေါင်းတိုက်သွင်းလို့ ပထမပိုင်းမှာ အာဆင်နယ်လ်က ၁ ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ ဦးဆောင်သွားခဲ့တယ်။
ဒုတိယပိုင်း ပြန်စတော့ ၁၀ ယောက်သာ ကျန်တဲ့ အာဆင်နယ်လ်ဟာ ခံစစ်ကို သိပ်သိပ်သည်းသည်း ဆော့ပါတော့တယ်။ မိုးကလေးကလည်း တဖွဲဖွဲ ရွာနေပြီး ဘာကာဟာ တရကြမ်း ဖိပါတယ်။ အာဆင်နယ် ဂိုးစည်းနားမှာတော့ ဂန်းနားတွေဟာ အကဿငျီအဝါတွေ ထပ်နေတယ် ထင်ရလောက်အောင်ကို ပိတ်ဆို့ ကစားနေခဲ့ရတယ်။ မကြာပါဘူး လာဆင်နဲ့ ဘောလက်တီကို နည်းပြက လူစားလဲ သွင်းလိုက်ပါတယ်။ လာဆင် ဝင်လာတာနဲ့ ဘာကာဟာ ကစားကွက် အချိတ်အဆက် ပိုမိလာတယ်။ လာဆင် အသာတို့ပေးလိုက်တဲ့ ဘောလုံးကို အီတိုးဆွဲယူပြီး ဂိုးသမားရဲ့ ညာဘက် ထောင့်ကျဉ်းကနေ ကန်သွင်းယူနိုင်ခဲ့လို့ ၁-၁ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ပွဲပြီးဖို့ ၉ မိနစ် အလိုလောက်မှာတော့ အသစ်ဝင်လာသူ ဘှောလက်တီ တအားကန်သွင်းလို့ ဘာကာဟာ ၂ ဂိုး ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ ဒီဂိုးကိုလည်း လာဆင်ပဲ ဖန်တီးပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ အာဆင်နယ်လ်ဟာ ချေပဂိုး ပြန်ရဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် မရရှိတော့တာကြောင့် ဒုတိယ နေရာနဲ့သာ ကျေနပ်ခဲ့ရ ပါတော့တယ်။
ဒီနှစ်မှာ ဘာကာဟာ အလွန်တရာ ကောင်းပါတယ်။ စပိန်လိဂ်မှာ ဗိုလ်စွဲနိုင်ခဲ့သလို နှစ်ငါးဆယ်ကြာ ဝေးကွာခဲ့တဲ့ ဒီချန်ပီယံလိဂ် ဖလားကိုလည်း ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ နည်းပြ ရစ်ကဒ်၊ ရိုနယ်လ်ဒင်ဟို၊ အီးတိုး၊ လာဆင်၊ ပူးယိုးလ် အစရှိတဲ့ သူများနဲ့ ဘာကာဟာ နောက်နှစ်တွေမှာလည်း ဆက်လက်အောင်မြင်မယ်လို့ အသေအချာ ယုံကြည်နေမိပါတယ် ခင်ဗျား။ အာဆင်နယ် ရှုံးသွားလို့ မျက်နှာ ရှုံ့မဲ့နေကြမယ့် သူငယ်ချင်းဟောင်း ကြီးများကိုလည်း သတိရနေမိပါတယ်ခင်ဗျား။
Tags : 2006 UEFA Champion , Barcelona FC , Chaos
Posted by NLS at 5/18/2006 05:30:00 AM0comments Links to this post
I know it could be hard to believe for you... huuummm, but it has really happened when he came here for honouring me. Honestly I didnt want to accept it. You see how happy his face when he shake with my hand. I know he was very very glad. Oh poor Mr. Bush!
Posted by NLS at 5/18/2006 12:23:00 AM0comments Links to this post
The Travels 0f Mingliatse
တောင်ခိုးကို နှစ်သက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့
ဘုန်းကြီး သင်တိုင်းရှည် ကြီးတွေဝတ်၊
တစ်ယောက်ကို ငွေ တစ်ရာစီယူပြီး ခရီးထွက်ကြပါတယ်။
ငွေတစ်ရာဟာ အရေးပှေါ အတွက်သာ။
ရွာငယ် ဇနပုဒ်တွေမှာ တောင်း
ဘာကိုပဲ တောင်းရမယ် ဆိုတာကိုလည်း သတိပြုခဲ့ကြပါတယ်
ဟင်းရွက် ကဇွန်းရွက်ကိုပဲ တောင်းပါတယ်
တောင်းတဲ့အသံဟာ နှိမ့် နှိမ့်ချချပါ
မပေးတဲ့အခါမှာလည်း သူတို့အနားက ခွာတာပါပဲ
ဦးညွတ်ပြီး ဒီလူတွေရဲ့ ရိုင်းပြမှုကိုခံယူလိုက်ပါတယ်
ကျွန်တှောတို့ယူခဲ့တဲ့ငွေထဲက တစ်ကျပ်တစ်ပြား သုံးရပါတယ်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို တွေ့တဲ့နေရာမှာ ခဏရပ်ပါတယ်
ရေကြက်နဲ့ ငှက်သာရကာ ကိုဖမ်းစားတဲ့အခါ
ရေထဲက ကျွန်း သေးသေးနေရာတစ်ခုရွေးပြီး ကျောက်တုံးတစ်ခုပှေါ ထိုင်ပါတယ်
ဇရာဒုဗဿဗလ သက်ကြီး ရွယ် အို တွေ တွေ့တဲ့အခါ
တောတောင်ရာသီ့ သာယာလှပတာကိုပဲ ပြောပါတယ်
ကုန်းကြောင်းသွားတဲ့အခါ ဘေးကိုရပ်ပြီး တခြားသူတွေကို ဖယ်ပေးပါတယ်
လှေစီးတဲ့အခါ တခြားသူ တွေကို ကိုယ့်အရင် လှေပှေါတက် စေပါတယ်
မိုးသက်မုန်တိုင်းလာတဲ့အခါ ချောင်းမြောင်းကိုဖြတ်ဖို့ မကြိုး စားပါ
ချောင်းမြောင်းကို ဖြတ်ဆဲ မိုးသက်မုန်တိုင်းကျတဲ့ အခါမှာတော့
ဘဝကို နားလည်မှုရှိစွာ ကံကြမဿမာကို အပ်လိုက်ပါတယ်
(ကျွန်တှောတို့ ကိုယ်ကို ကျွန်တှောတို့ပြောပါတယ်)
မြစ်ကိုဖြတ်ဆဲ ရေနစ်တာဟာလည်း ကောင်းကင်ဘုံ အလိုပါပဲ
တို့မလွတ်ရင် ဒါဟာ တို့ ခရီးအဆုံးပဲ
ကံကောင်းထောက်မလို့ လွတ်တဲ့အခါ ခရီးဆက်ရုံပါပဲ
သူ့ကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး တောင်းပန်လိုက်တာပါပဲ
တိုက်ကြ ခိုက်ကြရမယ် ဆိုရင်တော့
မတိုက်ခိုက်ရဘဲ လွတ်လာ ရင်တော့ ခရီးဆက်ရုံပါပဲ
တစ်ယောက်ယောက် နာ မကျန်းဖြစ်တဲ့အခါ
မကျန်းမာသူကို ပြုစုဖို့ နားရတာပါပဲ
နာဖျားသူ သူငယ်ချင်းကတော့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ခံယူတာ ပါပဲ
(သူ့အတွင်းကို သူပြန် ကြည့်ပြီး)
ကြီးကျယ်တဲ့ ဖျားနာခြင်း ဟာ (သေးသေးငယ်ငယ်လေး ဖြစ်သွားပြီး)
အာဂနဿတုအဖျား ဆိုရင် တော့ ပျောက်သွားတာပါပဲ
အဆုံးရောက်မှ အစကို ပြန်သွားမိပါတယ်
လျှောက်ခဲ့ကြတာ အတှောလေး ခရီးရောက်ခဲ့ပါပြီ
ကျွန်တှောဟာ တောင်ခိုး ကိုနှစ်သက်သူပါ
သူငယ်ချင်းဟာလည်း တောင်ခိုးကို နှစ်သက်သူပါပဲ
သူနဲ့ကျွန်တှော ခရီးအတူ ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်
တစ်ယောက်ကို ငွေတစ်ရာစီ ယူပြီးခရီးထွက်ခဲ့ကြတာပါ
တကယ်တော့ ကျွန် တှောတို့နှစ်ယောက်မတူကြတာ
ကျွန်တှော တို့သာ သိကြပါတယ်
သူငယ်ချင်းက စင်ကြယ်တဲ့ ဘုန်းကြီးသင်တိုင်းကို ဝတ်ပါတယ်
သူငယ်ချင်းမှာ ရှင်းသန့်တဲ့ ဦးပြည်းကတုံးရှိပါတယ်
(ကျွန်တှော့မှာ)တောင်တောင် အီအီ စဉ် ဆက်မပြတ် တွေးတတ်တဲ့
ထိုးထိုး ထောင်ထောင် အတွေးစတွေ ထွက်နေတဲ့ ဦးပြည်း ကတုံးရှိပါတယ်
သူငယ်ချင်းဟာ ပန်းတိုင် မရှိဘဲ ခရီးသွားနေသူပါ
(သွားချင် လို့ကို သွားနေတာပါ)
ကျွန်တှောဟာ ပန်းတိုင်မရှိဘဲသွားနေတဲ့ ဒီခရီးမှာပဲ
အတွေ့အကြုံတွေကို ပန်းတိုင်အဖြစ် တိတ်တခိုးမှတ်ယူနေသူပါ
ဘာကိုပဲ တောင်းရမယ် ဆိုတာ သတိပြုရင်း
ဟင်းရွက်၊ ကဇွန်းရွက်ကို တောင်းတဲ့အခါ
သူတို့ဆီက တစ်ခုခုရအောင် ကျွန်တှောယူပါတယ်
သူတို့နဲ့ ကျွန်တှောတို့ ဆက်ဆံပြောဆိုပုံထဲက၊ သူတို့ နေထိုင် ပြုမူပုံထဲက
အနည်းဆုံး တစ်ခုခုရ အောင်
ကျွန်တှော့သင်တိုင်းက စုပ် ယူပါတယ်
သူတို့ တစ်ဦးချင်းစီ ပှေါမှာ ကျွန်တှော့ ကိုယ်ပိုင်မှတ်ချက်တစ်ခုစီ ချခဲ့ပါတယ်
မပေးတာ ဘာတစ်ခုမှ မယူပါ
အစာမငတ်ဖို့ဆိုတာတစ်ခုကိုပဲ သူ နှလုံးသွင်းထားပါတယ်
ကိုယ်က နှိမ့်ချနေပါလျက်နဲ့ တစ်ဖက်လူရဲ့ ရိုင်းပြတဲ့ စှောကားမှုကို ဦးညွတ်ပြီး ခံယူရတဲ့အခါ
တခြားသူတွေကို ကိုယ့်အရင် လှေပှေါကို တက်စေရတဲ့ အခါ
ဒီအပြုအမူမျိုးဟာ လူတိုင်း နဲ့ တန်မတန် ကျွန်တှော စဉ်းစား နေတတ်ပါတယ်
ကျွန်တှောဟာ ခရီးရှည်လာတာနဲ့အမျှ သူများကို ပိုတွေ့လာ တယ်လို့ ထင်ပါတယ်
သူငယ်ချင်းက ခရီးရှည် လာတာနဲ့အမျှ သူ့ကိုယ်သူ ပြန်တွေ့ လာပါတယ်
ကိုယ်တွေ့မြင်တာ ကိုယ် ပြန်ကြည့်ကြတဲ့ခဏ ဖြစ်မယ်ထင်ပါ တယ်
(ကျွန်တှောတို့ရဲ့ မြင်နိုင်ခွင့်တွေမှာလည်း ကန့်သတ်မှု တွေရှိနိုင်ပါတယ်)
မိုးသက်မုန်တိုင်းထဲ ချောင်းမြောင်းတွေကို ဖြတ်ကြရတဲ့အခါ
သူငယ်ချင်းဟာ နှလုံး စိတ်ဝမ်း အေးချမ်းစွာရှိပါတယ်
သူ့ကိုယ်သူ ကံကြမဿမာဆီ ယုံယုံကြည်ကြည် အပ်နှံထားပုံရပါ တယ်
ကျွန်တှောကတော့ သူ့ လောက်အေးအေးချမ်းချမ်း မရှိပါ
တောင်တောင်အီအီ တွေးတောတတ်တဲ့ ကျွန်တှော့ ခေါင်းထဲမှာ သာ
စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ကြောက်စိတ် တွေဟာ
တလှည့်စီ ဝင်နေကြပုံရ ပါတယ်
မြစ်ချောင်းဖြတ်တုန်း ရေနစ်တာဟာလည်း ကောင်းကင်ဘုံ ရဲ့အလိုပါပဲတဲ့
ပူပန်နေလို့ရော လွတ်မှာ မို့လားတဲ့
မလွတ်ရင် ဒါ ခရီးအဆုံးတဲ့
ကံကောင်းထောက်မလို့ လွတ်မှ ခရီးဆက်တာပ တဲ့
သူငယ်ချင်းလောက် စိတ် မရှင်းတဲ့
စိုးရိမ်သောကများ တတ်တဲ့ ကျွန်တှော့အဖို့ ဒီတစ်ခါ အတှော အခက်တွေ့ခဲ့ပါတယ်
ဘာမှန်းမသိတဲ့ ကံကြမဿမာ ဆိုတာကြီးဆီမှာ
ကျွန်တှော့ အသက်ကို ဝကွက်အပ်ရတာ
ဒါ ဘဝလားဆိုတဲ့ မေးခွန်း ကြီးကို
မိုးခြိမ်းသံထက် ကျယ်အောင် ကြားလိုက်ရပါတယ်
ရာသီဥတုရယ်၊ လူနှစ် ယောက်ရယ်
မေးခွန်းတွေရယ်၊ အတွေး ရယ်
ရှုတ်ထွေးနေတဲ့ ခဏမှာ ပဲ ကျွန်တှောတို့ဟာ တစ်ဖက်ကမ်း ကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်
ဒါကို ကံကောင်းတယ် ဆိုရ မှာလား
ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ် သိပ်ကောင်းတဲ့ ကောက်ချက်တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါ
မတှောတဆဖြစ်မှု တစ်ခုခုပှေါမှာ စှောကားရိုင်းပြ ခံခဲ့ရရင်
တောင်းပန်ပါလျက်နဲ့ ထပ်ဆင့်စှောကား ရိုင်းပြလာခဲ့လို့
တိုက် ကြခိုက်ကြရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တှောတို့မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့
တောင်ဝှေး တစ်ချောင်းစီလောက်တော့ ရှိထားသင့်ပါတယ်
ခရီးအဆုံးကို ရောက်ရမယ်ဆိုရင်တောင်မှ ရုန်းကန်ပြီးမှ ရောက်ချင်ပါတယ်
ဒါပေမယ့် ကျွန်တှောတို့ ခရီးဆက်သွားခွင့်ကြုံခဲ့ပါတယ်
တစ်ခါမှာတော့ ကျွန်တှောတို့ ခရီးဆုံးကိုရောက်ခဲ့ကြရပါတယ်
လမ်းမှာ သူငယ်ချင်း မကျန်းမမာဖြစ်ပါတယ်
(လမ်းတစ်လျှောက် ဒီလိုပဲ မကြာမကြာ သူဖြစ်တတ်ပါတယ်)
သေမှာ မကြောက်တဲ့ (သေဖို့ရာ ပြင်ဆင်ပြီးသား ဖြစ်နေတဲ့)
(သေနေ့စေ့ပြီထင်ရဲ့ ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းတော့
အဲဒီနေ့ မနက် ကပြောသွားရှာပါသေးတယ်)
ကျွန်တှောကတော့ လူတွေမှာ အသင့်သတ်မှတ်ထား ပြီးသား
သေနေ့ဆိုတာရှိသလားလို့ စဉ်းစားရင်း ခရီးဆက်သွားနေရပါတယ်
ဆက်ပြီး တောင်းရမ်း စားသောက်နေရပါတယ်
ကျွန်တှောတို့ယူလာခဲ့တဲ့ ငွေထဲက၊ တစ်ကျပ်တစ်ပြား၊ ထုတ်သုံး နေရပါသေးတယ်။
ဘာကို မတောင်းသင့်ဘူး ဆိုတာတွေ ခါတိုင်းထက်တော့ နည်းနည်း ပိုသိလာသလိုပါပဲ
အဲဒီနောက်ပိုင်းတော့ ကျွန်တှော့မှာ ပြောစရာ များများ စားစား မကျန်တော့ပါ
ဒီခရီးကို အတူထွက်ခဲ့ကြတဲ့ ကျွန်တှောနဲ့ ကျွန်တှော့သူငယ်ချင်းဟာ
တစ်ယောက်တည်းပဲ ဖြစ်ကြောင်းတော့ ပြောပြခဲ့ဖို့ လိုအပ်ပါ လိမ့်မယ်။
လင်ယုတန် (Lin Yu Tan) ရေးသည်
ကိုတာ ။ မဟေသီ ။ စက်တင်ဘာ ။ ၂၀၀၀ “လျှောက်လည်ခြင်း” စာ ၁၁၄
ငြိမ်းအေးအိမ် ။ ချယ်ရီ
ကိုရက်ကွန်ဒိုက် ပုဂံဖိုရမ်မှ တင်ပေးသည်။
အလွန်တရာ လေးနက်တဲ့ စာလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရင်းနဲ့ စဉ်းစားသွားစေလိုပါတယ်။
Tags : Lin Yu Tan , The Travels 0f Mingliatse , Poem , Essay
Posted by NLS at 5/17/2006 10:18:00 AM0comments Links to this post
မိုးကောင်းကင် မျက်နှာကျက်မှာ ကြယ်ပွင့်လေးများနဲ့အတူ
သိမ်မွေ့နူးညံ့နေ မင်းအပြုံးတွေ ကမဿဘာမြေအနှံမှာ
ဖူးပွင့်နေ ပန်းရနံ့လို ရင်ခွင်ထဲ ငြိမ်းချမ်းလို့သွား
မိန်းခလေးရေ မင်းအချစ် မင်းအမုန်း အားလုံး အားလုံး
အားလုံးကို ငါတကယ် မြတ်နိုးလို့ စွဲမြဲလို့ ချစ်နေမှာ တစ်သက်လုံး
ပျှောရွှင်ခြင်းများနဲ့အတူ သင့်ကိုငါ နှလုံးသားနဲ့ ချစ်ခဲ့ပြီ
အချိုဆုံး မိန်းခလေးရေ မင်းအလှမှာ ငါနစ်မြောနေ
ပြောပါရစေ ခွင့်ပြုပါ ကြင်နာလို့ ချစ်ပါရစေတော့
တာ တာ တာ တာ တာ တာ တာ တာ တာ
ကျွန်တှော အကြိုက်ဆုံး ဒိုးလုံး သီချင်း တစ်ပုဒ်ပါ။ အလွန်တရာ ကောင်းပါတယ်။ သူ့လိုဆိုနိုင်ဖို့ အတှောပဲ ခက်ခဲပါတယ်။ နားထောင်ကြည့်ကြပါ။ [Download]
Tags : ဒိုးလုံး , Doe Lone , Doe Lone Song , Music , Lyric
Posted by NLS at 5/15/2006 07:29:00 AM0comments Links to this post
Youraslave to money then you die
You know I can't change, I can't change
Can't change my body,
That you've ever been down
ကျွန်တှော့ အကြိုက်ဆုံး သီချင်းလေးပါ။ တယောသံတွေနဲ့ စိတ်ကို လှုပ်ရှား လွမ်းမောဖွယ် ကောင်းလွန်း စေနိုင်တဲ့ သီချင်းလေး တစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အချိန် နားထောင်ထောင် အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ် မြန်မာပြည်ရဲ့ အဝေးတစ်နေရာမှာ ဒီသီချင်းကို စနားထောင်ခဲ့ရတယ်။ အခုချိန်အထိ စိတ်ကို လွှမ်းမိုးဆဲ သီချင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ဒီနေရာမှာ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ပြီး နားထောင်ကြည့် နိုင်ပါတယ်။ [Download]
Tags : The Verve , Song , Lyric , Download
Posted by NLS at 5/15/2006 04:10:00 AM0comments Links to this post
ကျွန်တှော့ ငယ်ဘဝမှာ မှတ်မှတ်ယယ ရှိခဲ့တဲ့ ပစဿစည်းလေးတွေ ကစားစရာ လေးတွေက သိပ်မများလှပါဘူး။ ပထမဆုံးက ကျွန်တှော အိပ်ခဲ့ရတဲ့ ပုခက်လေးကို မှတ်မိနေမိတယ်။ ကျွန်တှော့အသက် ၅နှစ်သား လောက်အထိ အိပ်ခဲ့တဲ့ ကြိမ်ပုခက်လေး။ တစ်ည ဒီကြိမ် ပုခက်လေးထဲမှာ အိပ်နေရင်းက အဖေအမေတို့ မသေပါနဲ့ ဆိုပြီး ညကြီး သန်းခေါင် အှောငိုခဲ့တာ လေးကိုလည်း သတိရနေ မိသေးပါတယ်။ ၄နှစ်သားအရွယ် ဘာမှမသိသေးတဲ့ ကျွန်တှော့ ဦးနှောက်ထဲကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဒီအတွေး ဝင်လာခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ကျွန်တှော ခုချိန်ထိ ဘယ်လိုမှကို စဉ်းစားလို့ မရပါဘူး။ ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုနေခဲ့ မိတာကိုပဲ မှတ်မိတော့တယ်။ နောက်တစ်ခုက သစ်သားမြင်းရုပ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမြင်းရုပ်လေးကို ကျွန်တှော အလွန်နှစ်သက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး စီးလို့မရအောင် ကျိုးသွားတာတောင် ကျွန်တှော လွှင့်မပစ်ရက်ပါဘူး။ အစ်ိမ်းရယ် အဖြူနဲ့ အနီ ကွက်ကျား ဆေးရောင်ခြယ်ထားတဲ့ ဒီမြင်းလေးဟာ ကျွန်တှော့ ငယ်ဘဝက ရင်းနှီးရလွန်းတဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ နောက်တစ်ခုက အနက်ရောင် ဂှေါဇီလာ ရုပ်လေး။ အဖေတို့နဲ့ ဂှေါဇီလာ ရုပ်ရှင်ကား သွားကြည့် ပြီးတဲ့နောက်မှာ ကျွန်တှော့စိတ်ထဲ ဒီအရုပ်လေးဟာ အပြင်မှာ တကယ် ရှိတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဂှေါဇီလာကြီးကို သူ့ သားသမီးတွေ အသံနဲ့ မျှားပြီး ခှေါလို့ မီးတောင်ထဲကို ကျသွားတဲ့ အခန်းဆိုရင် ကျွန်တှော စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရတာ လွန်ပါရော။
ကျွန်တှောတို့ နေထိုင်ရာ အညာဒေသက အဲဒီ အိမ်ကြီးမှာ တောက်တဲ့တွေ သိပ်ကို ပေါပါတယ်။ နီရဲရဲ ပါးစပ်တွေနဲ့ အဲဒီ တောက်တဲ့တွေကို ကျွန်တှောသာ မက၊ ကျန်တဲ့ သူတွေကလည်း တှောတော့ ကို မုန်းကြပါတယ်။ ညညဆို ထထအှောတတ်တဲ့ သူတို့ အသံကြောင့် အိပ်ရေးလည်း ပျက်ရပါတယ်။ ကျွန်တှောကတော့ တောက်တဲ့ ကိုက်ခံရမှာကို သိပ်ကြောက်တယ်။ ပြီးတော့ တောက်တဲ့ ကိုယ်ပှေါ ပြုတ်ကျလို့ ကပ်နေရင် မိုးကြိုး ပစ်မှ ကွာကျတယ် ဆိုလို့ သူတို့ ရှိရင် ယောင်လို့တောင်မှ အောက်က ဖြတ်မလျှောက် ရဲပါဘူး။ တစ်ရက်တော့ အကိုနဲ့ သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက စုစုစုစု နဲ့ တိုင်ပင်နေကြတာ တွေ့တော့ ကျွန်တှောက သွားမေးတယ်။ ဘာလုပ်နေကြတာလဲပေါ့။ ဪ သူတို့တွေ တောက်တဲ့ နှိမ်နှင်းရေး လုပ်ကြမလို့တဲ့လေ။ ကျွန်တှော တှောတှောလေး ပျှောသွားတယ်။ အဲဒီအချိန်က ကျွန်တှောက ၅ နှစ်၊ သူတို့တွေက ၁၃ နှစ်လောက်တွေပေါ့။ အခုမှ ပြန်စဉ်းစားမိတော့ ကျွန်တှော မပြောနဲ့ သူတို့တောင် ကလေး သာသာ ရှိသေးတာကိုး။ ကျွန်တှောတို့ ရဲ့ တောက်တဲ့ နှိမ်နင်းရေး ဆိုတာကလည်း သိပ် ကြီးကြီးမားမား ကြီးတော့ မဟုတ်လှပါဘူး။ တောက်တဲ့ မြင်ရင် အဝေးကနေ သာရေကွင်း ကြီးကြီးနဲ့ ပစ်ကြတာပါ။ ကျွန်တှောတို့က အဲဒီသားရေကွင်း မျိုးကို ဂိုင်ဒိုး လို့ ခှေါကြတယ်။ ဘာမှသာ မဟုတ်ပေမယ့် ၂ ပတ်လောက်အတွင်းမှာ အဲဒီတဝိုက်က အိမ်တွေမှာ တောက်တဲ့တွေ သိသိသာသာကြီးကို နည်းသွားတာ ကတော့ အသေအချာပါပဲ။
အပိုင်း ၄ ကိုဖတ်ရန် နှိပ်ပါ [Click]
ယခင် အက်ဆေး အဟောင်းများကို ဒီနေရာမှာ ရှာပါ [Essays]
Tags: Nyi Lynn Seck, Myanmar, Biography, Mother and Family, Essay
Posted by NLS at 5/14/2006 01:43:00 AM0comments Links to this post
အွန်လိုင်းမှာ ခုတလော မြန်မာ မင်းသမီး တွေရဲ့ ဆင်ဆာဓါတ်ပုံတွေ အတှောလေး ပျံ့နှံ့နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ချို့တွေလည်း အစစ်တွေ ဖြစ်သလို တစ်ချို့ဟာတွေကလည်း ကွန်ပြူတာ ဂရပ်ဖစ် နည်းပညာနဲ့ ပြုပြင်ပြီး လုပ်ထားတဲ့ ပုံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂရပ်ဖစ် လုပ်နေသူတွေ၊ အဲဒါနဲ့ ကျွမ်းဝင် ရင်းနှီးသူတွေကတော့ အတုအစစ် ဆိုတာကို အကြမ်းဖျင်း ခွဲခြားနိုင်ကြပါတယ်။ အခြားသူများ အတွက်တော့ ခွဲခြားဖို့ ခက်ပါတယ်။ ရီဆိုလူးရှင်းမြင့် ဓါတ်ပုံများကို ရယူပြောင်းလဲထားတယ် ဆိုရင် ကျွန်တှောတို့တောင် ဇဝေဇဝါ ဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သူများပြောတိုင်းလည်း မယုံကြပါနဲ့။ မျက်စိနဲ့ မြင်တိုင်းလည်း ဟုတ်တယ်ဆိုပြီး သွားမစွပ်စွဲလိုက် ကြပါနဲ့။ ဂရပ်ဖစ် ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ယောက်အတွက် ဒါမျိုး လုပ်တာ မခက်ခဲလှပါဘူး။ ဒါကြောင့် မိန်းခလေးများ အနေနဲ့ ကိုယ်နဲ့ အလွန်တရာ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူမဟုတ်ရင်၊ စိတ်ချ ယုံကြည်နိုင်စရာ လူမဟုတ်ရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ အရည်အသွေးမြင့် ဓါတ်ပုံ မပေးတာ ကောင်းပါတယ်။ ပေးချင်ရင် ၅၀ ကီလိုဘိုက်အောက် ပုံတွေကိုသာ ပေးသင့်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီလိုပုံတွေ တွေ့တဲ့အခါ အဲဒီပုံရဲ့ အရည်အသွေးကို စစ်ဆေးပြီး ယေဘုယျ အတုအစစ် ခွဲခြားလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ရီဆိုလူးရှင်း နဲတဲ့ပုံ သေးငယ်တဲ့ ပုံတွေဆိုရင် ဒါဟာ ပုံအစစ် မဟုတ်ဘူးလို့ ယေဘုယျ ကောက်ချက် ချလို့ ရပါတယ်ခင်ဗျား။ အထက်က ပုံကတော့ နမူနာ လုပ်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Tags : Myo Thiri Kyaw , Gandawin , Htet Htet Wint , Myanmar Model Nude , Graphic Design
Posted by NLS at 5/13/2006 05:09:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 5/12/2006 04:16:00 AM0comments Links to this post
အွန်လိုင်းမှာ Adsense အကြောင်းဖတ်ရလို့ စကဿငာပူတုန်းက လုပ်ထားတဲ့ အကောင့်လေးထဲ သွားကြည့်တာ ၅ ကျပ် ခွဲလောက် ရောက်နေတယ်။ ဟာဟ။ အဲဒါနဲ့ စိုက်စိုက်မတ်မတ် ၁ လ လောက် လုပ်ကြည့်ဖို့ စဉ်းစားမိတယ်။ ဘယ်လောက်များ ထိရောက်မှု ရှိသလဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တှောတို့ မြန်မာဘလော့ခ်တွေကို အားပေးသူ အရေအတွက်က အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်း တစ်ရက်မှ အယောက် ၁၀၀ လောက်ပဲ ရှိတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ ဆိုဒ်ကိုဝင်တဲ့ အခေါက်တွေကို နှုတ်ရင် ပုံမှန်ဟစ်ပွိုင့်က ၁၄၀ လောက်ပဲ ရှိတယ်။ အဲဒီအထဲက ဘယ်နှစ်ယောက်က ဒါကို နှိပ်မိမလဲ။ ကိုဝေဖြိုး ကတော့ ဒါမျိုးနဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေတယ် ကြားတယ်။ ကျွန်တှောကတော့ ကုဒ်ဒင်းက သိပ်မကျွမ်းကျင် လုပ်ပုံကိုင်ပုံက မသေသပ် မပိရိဆိုတော့ အဆင် သိပ်ပြေမယ်တော့ မထင်လှဘူး။ ဒါပေမယ့် စမ်းကြည့်မယ်။ ဒီနေ့ကနေ နောက်တစ်လအတွင်း ဘယ်လောက်များ ထူးခြားမလဲပေါ့။ ကုဒ်တွေ ဟိုရွှေ့ကြည့် ဒီရွှေ့ကြည့်နဲ့ ဒီနေ့မှ ပြီးတော့တယ်။ သူများတွေ ဘယ်လိုလုပ် နေကြသလဲဆိုတာ လိုက်စူးစမ်း လိုက်ဦးမယ်။
Tags : Adsense , Amazon Ads , Chaos
Posted by NLS at 5/11/2006 08:54:00 PM0comments Links to this post
ဂီတနက်သန် ကိုစောညိန်း မဂဿဂဇင်းမှာ ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ကာတွန်းကလေးပါ။ အဓိပဿပာယ် ကောင်းလွန်း ဟာသ မြောက်လွန်းလို့ ဒီမှာ တင်လိုက်ပါတယ်။ ကိုစောညိန်းအကြောင်း သိချင်သူတွေ သူ့သီချင်းတွေ ကာတွန်းတွေ ဖတ်ချင်သူတွေ မြန်မာပြည်ဖွားများ ဖိုရမ်မှာ ဦးမောင်ကို တင်ထားပေးတဲ့ ကိုစောညိန်း ဆိုတဲ့ ပိုစ့်မှာ ဆက်လက် ဖတ်ရှု နိုင်ပါတယ်။
Tags : Saw Nyein, Website , Funny
Posted by NLS at 5/10/2006 05:42:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 5/10/2006 05:18:00 PM0comments Links to this post
တစ်နေ့က အမပန်းနွယ်က မေးတယ်။ ညီမင်းဆက်ဆိုတာ ညီလင်းပဲလားတဲ့။ People Magazine မှာ ကဗျာရေးတင်လားတဲ့။ နဲနဲတောင် မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။ ဘယ့်နှယ်က ညီလင်းဆက် ကနေ ညီမင်းဆက် ဖြစ်သွားတာလဲပေါ့။ ခုတလော ဘာတွေ ဖြစ်နေမှန်းကို မသိဘူး။ ကိုယ်ကလည်း မဂဿဂဇင်းတွေ မပို့ဖူးဘဲ အွန်လိုင်းတွေမှာ အလကားတင်၊ စာအုပ်တွေ အလကားလျှောက်ဝေ နေတာဆိုတော့ အန်အှောဖစ်ရှယ်ပေါ့။ နောက်ဆို ကိုယ့်ကဗျာလေး မဂဿဂဇင်းမှာ ပါလာရင်တောင် သူ့များနာမည် ခိုးချတယ် အပြောခံရ ဦးမလားမသိ။ ဪဘဝဘဝ ဦးရာလူ စားစတမ်း ခေတ်ကြီး ဖြစ်နေပါလားနှော။
Tags : Nyi Min Seck , Poem
Posted by NLS at 5/10/2006 04:11:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 5/09/2006 12:05:00 AM0comments Links to this post
Best Photo Editing Freeware
ဖိုတိုအက်ဒစ်တင်း ဆိုတာနဲ့ လူတိုင်းက ဖိုတိုရှော့ပ်ကို ပြေးမြင်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဖိုတိရှော့ပ်ဟာ အခကြေးငွေပေးပြီး သုံးစွဲရတဲ့ ဆောဖ့်ဝဲလ် ဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်မှု အမြင့်မားဆုံး ဆိုတာကိုတော့ မပြောလိုတော့ပါဘူး။ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားတာနဲ့ အမျှ စက်ထဲမှာ နေရာယူတာလည်း များပါတယ်။ ဖိုတိုရှော့ပ် သုံးဖို့အတွက် မန်မိုရီ များများစားစားလည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။ တကယ်လို့များ ပိုင်ရိတ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေသာ ဝယ်မရဘူးဆိုရင်၊ ကိုယ့်စက်ကလည်း ဖိုတိုရှော့ပ်က တောင်းဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက် မပြည့်မှီဘူးဆိုရင် ဟောဒီ ဖရီးဝဲလ်လေးကို သုံးကြည့်သင့်ပါတယ်။ Pixia လို့ခှေါတဲ့ ပရိုဂရမ်လေးဟာ အရင်က ဂျပန်ဗားရှင်းသာ ရှိတာပါ။ နာမည် အတှောကြီးပါတယ်။ အဲဒီပရိုဂရမ်လေးမှာ ဖိုတိုရှော့က လုပ်နိုင်တဲ့ အရာတွေ များစွာကို လုပ်နိုင်ပါတယ်။ လေယာတွေ ထပ်ခြင်း ပေါင်းစပ်ခြင်းများလည်း လုပ်နိုင်တယ်။ စုတ်တံကိုလည်း နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်နိုင်သလို ကိုယ်တိုင်လည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်က ၃.၉ မက်ဂါဘိုက်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။
Pixia : [ http://www.snapfiles.com/get/pixia.html ]
Best Vector Image Creator
ဗက်တာ အင်းမေ့ခ်ျ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေဟာ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရာမှာ၊ အိုင်ကွန်းတွေ ပြုလုပ်ရာမှာ၊ လိုဂိုတွေ ပြုလုပ်ရာမှာ သိပ်အသုံးဝင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ထင်ရှားတာတွေကတော့ Adobe Illustrator, Corel Draw, Free Hand စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေဟာလည်း စွမ်းဆောင်အား ကောင်းသလို တန်ဖိုး ကြီးပါတယ်။ ဆိုဒ်လည်း ကြီးပါတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ် တစ်မျိုးခြင်းဆီမှာ အားနည်းချက် အားသာချက်တွေ ရှိပါတယ်။ အခု ကျွန်တှော လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ် ကတော့ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်က ထုတ်တဲ့ MS Expression ဆိုတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဗက်တာပုံများသာမက၊ လေယာများကိုပါ ရောစပ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုရလည်း အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ သာမာန်လူ တစ်ယောက်တောင် ခဏလေးနဲ့ တတ်ကျွမ်းသွား နိုင်ပါတယ်။ ဆိုဒ်ကတော့ ၅၀ မက် နီးပါး ရှိပါတယ်။ [Character Creation] တကယ်လို့ ဒါကိုမှ မသုံးချင်သေးဘဲ ခပ်သေးသေးနဲ့ စွမ်းဆောင်အား ကောင်းလွန်းတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို သုံးမယ် ဆိုရင်တော့ Inkscape ဆိုတာကို သုံးဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်ဟာ အခမဲ့ဖြစ်ပြီး အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ အတွက် ယခုအခါ လူတှောတှောများများ သုံးစွဲနေကြပါတယ်။ သူနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ အချို့ပုံတွေကို ဒီနေရာမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ [Screenshots]
Best Photo Resizing Freeware
တချို့သော ပုံတွေဟာ ဆိုဒ်ကြီးမားနေတဲ့အခါ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဆိုဒ်ရအောင် ပြန်ချုံ့ပေးရပါတယ်။ အရင်ကဆို အဲလို ဆိုဒ်ချုံ့ဖို့ ဖိုတိုရှော့ပ်ကိုပဲ သုံးရပါတယ်။ အခု ဖရီးဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေ ပှေါလာတဲ့အခါ အလွန် အသုံးဝင်လှပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ် သေးငယ်တဲ့အပြင် လွယ်လွယ်ကူကူ အပန်းမကြီးဘဲ ချုံ့နိုင်လာပါပြီ။ အဲဒီလို ဖိုတိုရီဆိုဒ်ဇင်း လုပ်တဲ့ ဖရီးဝဲလ်ယား တွေထဲက အကောင်းဆုံး တစ်ခုကတော့ Pixresizer လို့ခှေါတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံတစ်ပုံချင်းဆီကို ချုံ့နိုင်ရုံသာမက Batch Resizing လို့ခှေါတဲ့ ပုံအများကြီးကို တပြိုင်နက် ချုံ့နိုင်တာမျိုးလည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံတွေကို ကြည့်ရှုရုံသာမက ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေထဲမှာ ကျွန်တှော အနှစ်သက်ဆုံးက ဂူးဂယ်လ်က ဖရီးပေးထားတဲ့ Picasa ဆိုတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်ဟာ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ ပုံတွေကို ဂယ်လာရီအလိုက် ကြည့်နိုင်ရုံသာမက မမြင်စေချင် တာတွေကိုလည်း ဖွက်ထားလို့ ရပါသေးတယ်။ ဓါတ်ပုံ တစ်ခုချင်းဆီသာမက အားလုံးကို စုပြီးလည်း အရောင်တွေ ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ်။ ဘလှော့ခ်ဂါ သုံးစွဲသူများအနေနဲ့ အဲဒါကိုသုံးပြီးလည်း ကိုယ့်ဘလော့ခ် အပှေါကို ပုံတွေ တိုက်ရိုက် တင်နိုင်ပါတယ်။
Best Capturing Picture Freeware
ကွန်ပြူတာ မှောနီတာ ပှေါက ပုံတွေကို၊ စာသားတွေကို ဓါတ်ပုံအဖြစ် ဖမ်းယူနိုင်တဲ့ ဖရီးဝဲလ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်နှစ်သက်ရာ ဖိုင်အမျိုးအစားနဲ့ ကူးယူနိုင်ပါတယ်။ ဝင်းဒိုး တစ်ခုလုံးသာမက ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်း လေးကိုလည်း မှတ်သားပြီး ကူးယူနိုင်ပါတယ်။ သုံးခဲ့ဖူးသမျှ Capture ဆော့ဖ်ဝဲလ် တွေထဲမှာတော့ ဒီ FastStone ဆိုတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးကို စိတ်တိုင်းအကျဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်နဲ့ တူတဲ့ အခြားဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေ ကို ဒီနေရာမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ [Best Capturing Softwares]
Best Sound Editing Freeware
အသံသွင်းယူခြင်း၊ အသံတည်းဖြတ်ခြင်း များအတွက် အကောင်းဆုံးနဲ့ အပေါ့ပါးဆုံး ဖရီးဝဲလ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အခမဲ့ သုံးစွဲခွင့် ပေးထားပေမယ့် သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ အလွန်တရာ ကောင်းပါတယ်။ Audacity ဟာ ဆိုနီရဲ့ အက်ဆစ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်လို သုံးစွဲလို့ ရသလို၊ ဝေ့ဖ်ဖိုင်တစ်ခုချင်းစီကို အသံတွေပြောင်းလဲလို့လည်း ရပါတယ်။ အသံတွေ ပြုပြင်ပြီးတဲ့အခါ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဖိုင်အမျိုးအစားနဲ့ ထုတ်ယူနိုင်ပါသေးတယ်။
အမ်ပီသရီး ပလေယာတွေ ထဲမှာတော့ Winamp ဟာ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်နှစ်သက်ရာ ပုံစံတွေကိုလည်း ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ယူလို့ ရပါတယ်။ အမ်ပီသရီး ဖွင့်ရုံတင် မကဘဲ အွန်လိုင်း ရေဒီယိုလိုင်းများ ဖမ်းယူ နားထောင်ရာမှာလည်း အလွန်ကောင်းပါတယ်။
Best Word Processing Freeware
ယနေ့ မီဒီယာခေတ်မှာ စာစီစာရိုက်နဲ့ စာရင်းဇယားဟာ ကွန်ပြူတာ သုံးစွဲသူတိုင်းနဲ့ မလွတ်ကင်းနိုင် ကြပါဘူး။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ဟာ Microsoft Office ဆိုတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ထုတ်ပြီး အကျိုးအမြတ် လွန်စွာ ရရှိခဲ့သလို အများအတွက်လည်း အလွန် အသုံးတဲ့ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တော့ အဲဒါဟာ အခမဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ် မဟုတ်ပါဘူး။ အခုပှေါလာတဲ့ Open Office ဆိုတဲ့ ဖရီးဝဲလ်မှာတော့ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်အော့ဖစ်က လုပ်နိုင်တဲ့ အရာတွေ အားလုံး နီးပါးကို လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝါဒ် သာမက အိပ်ဇဲလ်၊ ပါဝါပွိုင့်များပါ လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အတှောလေး ကောင်းပါတယ်။
[Open Office] www.openoffice.org
Best PDF Creator Freeware
ကိုယ့်ဖိုင်တွေကို ပီဒီအဖ် လုပ်ဖို့ရာ အရင်ကဆို အတှောခက်ခဲပါတယ်။ Adobe Acrobat6ကို အတှော လိုက်ရှာရပါတယ်။ လေးလည်း လေးပါတယ်။ အခု ဖရီးဝဲလ်ဖြစ်တဲ့ PDF Creator ကတော့ သေးသေးလေးနဲ့ ကိုယ်နှစ်သက်ရာဖိုင်ကို အခရိုဘတ် ဖိုင်အဖြစ် လွယ်လွယ်ကူကူ ပြောင်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
[PDF Creator] http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ထားသူများ၊ အခြားဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုသို့ ဖိုင်များ တင်ခြင်း၊ ကူးယူခြင်းများ ပြုလုပ်လိုသူများ အနေနဲ့ အဆိုပါ ဆိုဒ်က FTP Access ပေးတယ်ဆိုရင် အက်ဖ်တီပီ ကလိုင်းရင့်ကို သုံးခြင်းအားဖြင့် ပိုမိုလွယ်ကူ လျှင်မြန်စေနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးထဲမှာ FileZilla ဆိုတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဟာ အကောင်းဆုံးနဲ့ အလွယ်ကူဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
Best File Defragmentor
ကွန်ပြူတာ သုံးစွဲသူများ အနေနဲ့ တစ်လကို အနည်းဆုံး ၁ ကြိမ်လောက်တော့ စက်ကို ဒီဖရက် လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒီဖရက်လုပ်တယ် ဆိုတာ ဟက်ဒစ် ပှေါမှာ နေသားတကျ မဟုတ်ဘဲ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ ဖိုင်တွေကို အစီအစဉ်ကျအောင် လုပ်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်တွေ ပြန့်ကျဲနေတဲ့အခါ ကိုယ့်စက်ဟာ မလိုအပ်ဘဲ အချိန်တွေကြာပြီး လေးနေတတ်ပါတယ်။ ဖိုင်အထုတ်အသွင်း များသူများ၊ ပရိုဂရမ်များစွာ အင်စတောလ် လုပ်လိုက် ဖျက်လိုက် လုပ်သူများအတွက်တော့ ဒီဖိုင်ပြန်စီခြင်းက မရှိမဖြစ် လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်းဒိုးစ်မှာ ဒီစနစ်က အစထဲက ပါပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် ကြာပါတယ်။ အောက်က Power Defragmenter ကတော့ ပိုမို လျှင်မြန်စွာ ဖိုင်တွေကို စီပေးနိုင်ပါတယ်။
[Power Defrag] http://www.softpedia.com/get/System/Hard-Disk-Utils/Power-Defragmenter.shtml
ဒေါင်းလုဒ် မန်နေဂျာ ပရိုဂရမ်များဟာ ဖိုင်တွေကို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ရာမှာ အလွန် အသုံးဝင်လှပါတယ်။ ပုံတွေကို တစ်ပုံချင်း ကူးယူနေမယ့်အစား တစ်ပြိုင်နက်လည်း ကူးယူနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဖိုင်အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပြီးတော့လည်း ကူးယူနိုင်ပါတယ်။ ဒေါင်းလုဒ် မန်နေဂျာတွေထဲက ကျွန်တှော အနှစ်သက်ဆုံးက FDM ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Streaming ဖိုင်များမှအပ ကျန်ဖိုင်အားလုံးကို ကူးယူနိုင်ပါတယ်။ လင့်ခ်ပေါင်းများစွာကို NotePad မှာရေးမှတ်ပြီး တစ်ကြိမ်တည်းမှာ တစ်ပြိုင်နက် ကူးယူလို့လည်း ရပါတယ်။ ဖိုင်တစ်ခုအတွက် သက်ဆိုင်ရာ လင့်ခ်မှာ မရရင် မေရာလင်ခ့် ရှာပြီး ကူးပေးနိုင်လို့ မြန်လည်း မြန်ပါတယ်။
တောရင့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေဟာ ယနေ့အချိန်မှာ အလွန်ပဲ အသုံးဝင် အကျိုးရှိလှပါတယ်။ ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံး Peer to Peer ဆက်သွယ် အသုံးပြုနိုင်လို့ ဖိုင်တွေကို အင်တာနက် ဆာဗာတွေပှေါ မတင်ဘဲ ကိုယ့်စက်ကနေ တိုက်ရိုက် P2P Network ကိုဆက်သွယ်ပြီး ပေးပို့ရယူ နိုင်ပါတယ်။ အရွယ်အစား ကြီးမားတဲ့ ဖိုင်တွေကို ရယူရာမှာ ပုံမှန်အတိုင်းဆို အချိန်ကြာမြင့်ပေမယ့် ဒီတောရင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေ သုံးစွဲပြီး ရယူမယ် ဆိုရင်တော့ ပိုမို မြန်ဆန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါတင်မကဘဲ တကူးတက ဂရုတစိုက် ကူးယူနေစရာ မလိုဘဲ သူ့ဘာသာ စီမံခန့်ခွဲပြီး ကူးယူနိုင်လို့ အလုပ်မရှုပ်တော့ပါဘူး။ Torrent Client ပေါင်းများစွာ ရှိတဲ့ အထဲမှာ နာမည်အကြီးဆုံး နှစ်ခုက Azureus နဲ့ Utorrent ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Utorrent ကတော့ အသွင်သဏဿဍာန် ပိုမိုရှင်းလင်းပြီး ပရိုဂရမ်ကို အင်စတောလ် လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။ တိုက်ရိုက် ဖွင့်နိုင် ပိတ်နိုင်ပါတယ်။ စွမ်းအားလည်း ကောင်းပါတယ်။
Best Extension for Download Manager
ဒါကတော့ ဖိုင်းယားဖောက်စ် ဘရောက်ဇာ အသုံးပြုသူတွေအတွက် မရှိမဖြစ် Extension တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို ဒီအတိုင်း အသုံးပြုလို့ မရဘဲ ဒေါင်းလုဒ် မန်နေဂျာတစ်ခုနဲ့ အသုံးပြုရပါတယ်။ ကျွန်တှောကတော့ အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ FDM နဲ့ တွဲသုံးပါတယ်။ ဒီ Flash Got ဆိုတဲ့ အိပ်စ်တန်းရှင်းလေးဟာ ဖိုင်းယားဖောက်စ်ရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံးနဲ့ ပှေါပြူလာ အဖြစ်ဆုံးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ပါတဲ့ Build Gallery ဆိုတဲ့ ဖန်ရှင်လေးဟာ အတှောပဲ အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဝဘ်ဆိုဒ် တစ်ခုလုံးမှာ ရှိတဲ့ ရှိသမျှ ဒေတာ အားလုံးကိုလည်း ကလစ်တစ်ချက် နှိပ်ရုံနဲ့ ကူးယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ဖိုင်းယားဖောက်စ်မှာပဲ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အိုင်အီးအတွက် မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျား။
[Flash Got] https://addons.mozilla.org/firefox/220/
Best Chat Client
Internet Messaging နဲ့ Chatting Client တွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးကတော့ Trillian ဆိုတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို သုံးရုံနဲ့ Yahoo Messenger, IRC, ICQ အစရှိတဲ့ဟာတွေ အားလုံးကို တပြိုင်နက် ဝင်ရောက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါက Shareware ဖြစ်ပါတယ်။ အခမဲ့ သုံးခွင့်ပြုသလို ပိုက်ဆံပေးဝယ်ယူရင် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ သုံးစွဲနိုင်တဲ့ အမျိုးအစားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဖိုင်းယားဝေါလ်ဆိုတာ ကိုယ့်စက်ထဲကို တစ်ခြား ကွန်ပြူတာတွေ၊ ကိုယ့်ခွင့်ပြုချက် မရှိတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေ ဝင်ရောက်မလာအောင် တားဆီးပေးတဲ့ လုံခြုံရေး အတားအဆီး တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုနေစဉ်မှာ ကိုယ်မသိတဲ့ ပရိုဂရမ် တစ်ခု အလုပ်လုပ်လာတယ်ဆိုရင် ခွင့်ပြုနိုင်သလို ပိတ်ထားလို့လည်း ရပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အလိုအလျောက် ပရိုဂရမ်တွေ အလုပ်မလုပ် နိုင်တော့ပါဘူး။ တစ်ခု သတိထားရမှာက ကိုယ်အသုံးပြုနေကြဖြစ်တဲ့ ပရိုဂရမ်များ၊ တောရန့်် ကလိုင်းရင့်များ၊ ရဟူးမက်ဆင်ဂျာလို ဆားဗစ်များကိုတော့ ခွင့်ပြုချက် ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကို သွားပိတ်လိုက်ရင် အလုပ်လုပ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွမ်းကျင်သူများ အနေနဲ့ကတော့ အချိန်မရွေး အဖွင့်အပိတ် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ ဖိုင်းယားဝေါလ် တွေထဲမှာ သုံးစွဲရတာ လွယ်ကူ အဆင်ပြေ တာကတော့ ZoneAlarm ဆိုတဲ့ ဖိုင်းယားဝေါလ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်ဟာလည်း Shareware ဖြစ်ပါတယ်။ ပါဆင်နယ် သုံးစွဲသူတွေ အနေနဲ့ အခမဲ့ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုသုံးစွဲရတာ ခက်သေးတယ် အဆင်မပြေဘူး ဆိုရင်တော့ Sygate Personal Firewall ကိုသုံးစွဲပါလို့ အကြံပြုပါတယ်။ နှစ်ခုစလုံး ကောင်းမွန် လွယ်ကူပါတယ်။
Best Antivirus Freeware
အခမဲ့ ပေးသုံးတဲ့ အန်တီဗိုင်းရပ်စ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေထဲမှာတော့ Avast ဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ရှင်းလင်း လွယ်ကူတဲ့အပြင် နောက်ဆုံးပှေါ ဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစားများကိုလည်း ဖမ်းပေးနိုင် တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။ Update လည်း လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ပုံစံလေးက လှတဲ့အပြင် အသုံးလည်း တည့်လှပါတယ်။ ပိုက်ဆံ တတ်နိုင်သူများ အနေနဲ့ကတော့ အန်တီဗိုင်းရပ်စ် ဆော့ဖ်ဝဲ တစ်မျိုးမျိုးကို ဒှေါလာ ၃၀-၄၀ အကုန်ခံပြီး ထည့်သွင်းထားသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။
Best Ad/Spyware Remover
Ad/Spyware ဆိုတာ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ မတူပါဘူး။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်က ကွန်ပြူတာရဲ့ ဒေတာတွေ မှတ်ဉာဏ်တွေကို ဖျက်ဆီးတာ ဖြစ်ပြီး၊ ဒါတွေကတော့ စက်ကို လေးလံစေတာ၊ သူတစ်ပါးက ချုပ်ကိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ စပိုင်ဝဲလ် အဒ်ဝဲလ် ထိတဲ့ စက်ဟာ စွမ်းဆောင်ရည် အလွန်ကျဆင်း လာပါတယ်။ မန်မိုရီ သုံးစွဲမှုကို စစ်ဆေးကြည့်ရင် အမြဲတမ်း ၉၀% လောက် ရှိနေတာ တွေ့ရပါမယ်။ ကိုယ်က လင့်ခ်တစ်ခုကို သွားပေမယ့် ရောက်ချင်တဲ့ လင့်ခ်ကို ရောက်သွားတယ်။ မလိုလားတဲ့ ဆိုဒ်တွေ အလိုလို တက်လာတယ်။ ပုံတွေ တက်လာတယ်။ ဒါတွေဟာ စပိုင်ဝဲလ်တွေရဲ့ အစွမ်းတွေပါ။ အဲဒါတွေဟာ ကိုယ့်စက်ရဲ့ ရက်ဂျစ်စတြီ များထဲမှာကို ကုတ်တွယ် နေတတ်ပါတယ်။ မတတ်လို့ရှိရင် ဖျက်ရတာ အတှောခက်ပါတယ်။ အဲဒါတွေ ကိုယ့်စက်ထဲမှာ ရှိတယ်လို့ သံသယ ရှိနေရင် Spybot ဆိုတဲ့ အခမဲ့ ပရိုဂရမ်လေးကို အသုံးပြုပြီး ရှင်းလင်း ပစ်နိုင်ပါတယ်။ သုံးစွဲရ လွယ်ကူပြီး အစွမ်းထက်ပါတယ်။ ဖိုင်းယားဝေါလ် တစ်ခုရယ်၊ အန်တီဗိုင်းရပ်တစ်ခုရယ်၊ စပိုင်ဝဲလ်ရီမုဒ်ဗာ တစ်ခုရယ်ဟာ အင်တာနက် သုံးစွဲသူတိုင်း မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Best File Archiving Freeware
ကိုယ့်မိတ်ဆွေ တွေဆီကို ဖိုင်ပေါင်း ၁ဝဝလောက် ပို့ချင်တဲ့အခါ ဖိုင်တွေ အများကြီးကို တစ်နေရာထဲမှာ ထည့်ပြီး တစ်ကြိမ်တည်း ပို့နိုင်ဖို့အတွက် ဒီလိုဆော့ဖ်ဝဲလ်မျိုးကို သုံးရပါတယ်။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်များဟာ ဖိုင်တွေကို စုစည်းပေးနိုင်သလို ဖိုင်ဆိုဒ်တွေကိုလည်း ချုံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ချုံ့တာဟာ ရီဆိုလူးရှင်း ကျသွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ ဖိုင်ထဲထည့်ထားချိန်မှာ ဖိုင်ဆိုဒ် သေးငယ်နေပြီး ပြန်ထုတ်ယူ ချိန်မှာတော့ နဂိုအရွယ်အစားအတိုင်း ပြန်ရနိုင်ပါတယ်။ နာမည်ကြီး ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေကတော့ Winzip, Winrar စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု7Zip ဆိုတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကတော့ အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလ် ဖြစ်တဲ့အပြင် အထက်ပါ နာမည်ကြီး ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေ အားလုံး လုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ထက် ပိုမိုမြင့်မားစွာ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်ချုံ့နိုင် စွမ်းအားလည်း ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုသုံးရင် ကျန်တဲ့ ဝင်းဇစ်၊ အာအေအာဖိုင် စတာတွေကိုပါ ဖြေနိုင် ချုံ့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
[7 Zip] http://www.7-zip.org/
ဖိုင်တစ်ခုကို စက်ထဲကနေ Delete ခလုတ်နှိပ်လိုက်တိုင်း အမှန်တကယ် ပျက်သွားတာ မဟုတ်သေးပါဘူး။ မျက်စိအမြင်မှာ မမြင်နိ်ုင်တော့ပေမယ့် ဟာဒ်ဒစ့်မှာ ကျန်နေနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီ CCleaner ဆိုတဲ့ ပရိုဂရမ်လေးက အဲဒီလို ဖျက်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေကို လက်ကျန်မရှိအောင် ဖျက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်တွေသာ မကဘဲ အသုံးမဝင်တဲ့ Registry ဒေတာတွေ၊ ကိုယ်သွင်းထားမိတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေ၊ အင်တာနက် ဟစ်စထြီဖိုင်တွေ၊ ကရ်ှဖိုင်တွေကိုလည်း ဖျက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သုံးစွဲရ အလွန် လွယ်ကူပြီး လျှင်မြန်ပါတယ်။
Best File Encryption
File Encrypt လုပ်တယ်ဆိုတာ တနည်းအားဖြင့် ဖိုင်ကို ကာကွယ်ခြင်း တစ်မျိုးပါပဲ။ တချို့က ဖိုလ်ဒါကို စကားဝှက်သုံးပြီး ကာကွယ်လို့ရတယ်။ တချို့က ဖိုင်ကိုချုံ့ပြီး ကာကွယ်ကြတယ်။ ဒီ Axcrypt ကတော့ ဖိုင်ကို ကိုယ်နှစ်သက်ရာ စကားဝှက်ပေးပြီး ကာကွယ်လို့ရတဲ့ သေးငယ်ပေါ့ပါး အစွမ်းထက်လှတဲ့ ဖရီးဝဲလ် တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စကားဝှက်သုံးပြီး ဖိုင်ကို Encrypt လုပ်လိုက်တာနဲ့ အဲဒီဖိုင်ဟာ Axcrypt ဖိုင်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ အဲဒါကို ပြန်ဖြေလိုက်ရင် နဂိုဖိုင် ပြန်ရပါမယ်။ ကိုယ့်ဖိုင်တွေ လုံခြုံရေးအတွက် ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးက အလွန် အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဖိုင်တစ်ခု အပှေါမှာ ညာဘက်ကလစ်ကို နှိပ်ပြီး ပြောင်းလဲ လိုက်ရုံနဲ့ ရတာမို့ အလွန်လည်း လွယ်ကူပါတယ်။
Best File Scanner
HijackThis ဆိုတာ နာမည်ကြီး ဖိုင်တွေကို စစ်ဆေးပေးတဲ့ ပရိုဂရမ် သေးသေးလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်စက်ထဲမှာ ဘာဖိုင်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို စစ်ဆေးလို့ ရပါတယ်။ ကွန်ပြူတာ ပြင်တဲ့သူတွေ၊ ဗိုင်းရပ်စ် သတ်တဲ့သူတွေ လက်စွဲထားတဲ့ ပရိုဂရမ်လေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Best Lyric Detector
သီချင်းတွေ နားထောင်တဲ့အခါ စာသားကို လိုချင်လာခဲ့ရင် သက်ဆိုင်တဲ့ စာသား ဝဘ်ဆိုဒ်တွေမှာ သွားသွားရှာရတာ အလုပ်အတှော ရှုပ်ပါတယ်။ ဒီ Evillyrics ဆိုတဲ့ပရိုဂရမ် လေးကတော့ သီချင်း ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ တပြိုင်နက် သူ့ဘာသာ အင်တာနက်ကို ချိတ်ဆက်ပြီး စာသားကို ရှာပေးနိုင်ပါတယ်။
Stellarium ဆိုတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဟာ အကောင်းမွန်ဆုံး အခမဲ့ ကောင်းကင်ကြည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကြယ်တွေ ဂြိုဟ်တွေ နကဿခတ်တာရာတွေကို လက်ရှိ အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ရာသီစက်ဝန်းတွေ၊ ကြယ်စုတန်းတွေ၊ နက်ဗျူလာတွေကိုလည်း ရုပ်ပုံတွေနဲ့ ပြထားပါသေးတယ်။ နမူနာ ပုံတွေကို ဒီနေရာမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် [Screenshots] ကောင်းကင်ကြည့်ရတာ နှစ်သက်သူတိုင်း သဘောကျ ကျေနပ်ကြမယ့် ဆော့ဖ်ဝဲလ် တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက် : အထက်ပါ အခမဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ် အားလုံးမှာ ကျွန်တှောကိုယ်တိုင် စမ်းသပ် သုံးစွဲပြီးသား ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေ ထဲက အကောင်းဆုံးတွေကို ရွေးချယ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုရာမှာ ကျွန်တှော သုံးစွဲရတာ လွယ်ကူမှုနဲ့ အစွမ်းထက်မှု အပှေါမှာ မူတည်ပြီး ကိုယ့်သဘောကျ ရွေးချယ်ထားတာ ဖြစ်လို့ တခြား ဘယ်သူနဲ့မှ တထပ်တည်း တူညီမှုတော့ ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအတွက် ကိုယ်နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ် သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ အခက်အခဲ ရှိလျှင် အီးမေလ်းနဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်း နိုင်ပါတယ်။ အခကြေးငွေ နဲ့မှအပ အခြားသူများကို နှစ်သက်သလို လက်ဆင့်ကမ်း ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Tags : Best Freewares , Software , Freeware , Download ,Best Screen Capture, Best Sky Map, Best Lyric Detector, Best File Scanner, Best File Encryption, Best File Cleaner, Best File Archiving, Best Ad/Spyware Remover, Best Firewall, Best Chat Client, Best File Defragmentor, Best FTP Client, Best PDF Creator, Best Word Processing, Best MP3 Player, Best Sound Editing, Best Image Viewer, Best Photo Resizing, Best Vector Image Creator
Posted by NLS at 5/07/2006 03:59:00 PM 1 comment Links to this post
ပီစီဝေါလ်ကနေ ကွန်ပြူတာ မားသားဘုတ် အမျိုးအစားပေါင်း များစွာထဲက အကောင်းဆုံးနဲ့ ဝယ်ယူဖို့ အသင့်တှောဆုံး တွေကို နှိုင်းယှဉ် ရွေးချယ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာ ဝယ်ယူဖို့ ပြင်နေသူတိုင်း၊ အသစ်လဲလှယ် ချင်သူတိုင်း၊ အဆင့်မြှင့် ချင်သူတိုင်း ဖတ်ရှု့သင့်ပါတယ်။ အောက်ပါ အမျိုးအစား မားသားဘုတ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ Bench Mark စမ်းသတ်ချက် အဆင့်တွေလည်း ပါပါတယ်။
DFI LanParty UT RDX200 CF-DR
EVGA nForce4 SLI-AMD
Source : [ PC World ]
Tags : PC World's Best Motherboard , Hardware
Posted by NLS at 5/07/2006 01:19:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 5/07/2006 02:50:00 AM0comments Links to this post
လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီကို ဘက်စုံထူးချွန်တဲ့ သူလို့ အများခှေါကြတယ်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတာ တိတိကျကျ သိသူက နည်းပါတယ်။ လီယိုနာဒိုလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ မိုနာလီဆာ ပန်းချီကားနဲ့ တွဲပြီး မြင်ကြတယ်။ အဲဒီပန်းချီကားလိုပဲ သူ စိတ်ကူးနဲ့ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ အံ့မခန်း တီထွင်မှုများကလည်း အများအပြားပါ။ လီယိုနာဒိုကို ပါရမီရှင်လို့ သတ်မှတ်ဖို့ ချီတုံချတုံ ဖြစ်နေတဲ့သူတွေ ဟောဒီဆိုဒ်လေးကို သွားကြည့်လိုက်ပါ [ Click ] သံသယတွေ ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ရီနေဆန့်ဆိုတဲ့ အသိပညာတိုးတက်ရာ ခေတ်မှာ အထူးခြားဆုံး သူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကူးတွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံများက ကှောပီရိုက်နဲ့ ငြိနေလို့ တင်မပေးတော့ ပါဘူး။
Tags : Leonardo da Vinci , Website
Posted by NLS at 5/05/2006 07:18:00 PM0comments Links to this post
ဂူးဂယ်အတ် ကနေ မြန်မာပြည်အတွက် ပထမဆုံး အဆင့်မြင့် မြေပုံကို ဒီနေ့ ထည့်သွင်းပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဆင့်မြင့် ဆိုပေမယ့် အမေရိကလို ပေ၁၀၀ လောက်အထိ ပြတ်သားစွာ မြင်ရတာမျိုးတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ အခုဟာကတော့ အမြင့်ပေ ၁၀၀၀ လောက်အထိ ပြတ်သားစွာ မြင်ရတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တနသဿငာရီတိုင်း ထားဝယ်မြို့နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အနည်းငယ် အတွက်ပါ။ သူများတွေတော့ မသိဘူး။ ကျွန်တှောကတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံကို အဲလို မြင်ရတာ သိပ်သဘောကျ မိပါတယ်။ ရန်ကုန်တွေ၊ မနဿတလေးတွေ အရင်မလာဘဲ ဘာလို့ ထားဝယ်ဘက်ကို အရင်တင်တာလည်း ဆိုတာတော့ စဉ်းစားမရပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် များမကြာမီမှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ အဓိက မြို့နေရာတွေကို အရည်အသွေးမြင့် မြေပုံအနေနဲ့ မြင်လာရလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။ ထားဝယ်သူ ထားဝယ်သား များကတော့ ပထမဆုံး ကံကောင်းတာပေါ့လေ။ ကိုယ်တွေကမှ ဒါမျိုး ဓါတ်ပုံတွေ မရိုက်နိုင်တော့လည်း သူများနိုင်ငံက အလကား ရိုက်တင်ပေးတာတွေ စောင့်ကြည့်ရတာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တှောကတော့ တစ်နေ့မှာ ဂူဂယ်လ်အတ်လေး ဖွင့်ပြီး ဟိုနေရာ ဒီနေရာ မကြည့်ရရင် တစ်ခုခု လိုနေသလိုပဲ ခံစားရမိတယ်။ အလုပ်ပိုတွေလို့ သူများတွေ ဆိုမလားပဲ။ ထားဝယ်မြို့ကို အမြင့်ပေ ၄၀၀၀ ကနေ မြင်ရတဲ့ ပုံကို ဒီနေရာမှာ ကြည့်ပါခင်ဗျား။ [ နှိပ်ပါ ]
Tags : Myanmar High Resolution Map , Dawei Map , Chaos
Posted by NLS at 5/05/2006 03:38:00 AM0comments Links to this post
ပြောရတာလည်း မကောင်းဘူးဗျာ။ ဒီနေ့ ထရက်ကင်းတွေ လိုက်ကြည့်ရင်း မြန်မာနာမည် နောက်တစ်ခုနဲ့ ဘလောခ့်ကို တွေ့လို့ သွားကြည့်လိုက်မိတယ်။ ဘုရားဘုရား မျက်စိတောင် လည်သွားတယ်။ ဘလှောခ့်တစ်ခုလုံးကို ကျွန်တှော့ဘလှော့ခ်နဲ့ တပုံစံထဲ။ (အပှေါပုံက လိပ်စာ နေရာကိုကြည့်ပါ)။ အဲဒီလိုတော့ မကောင်းပါဘူးဗျာ။ စိတ်လည်း တှောတှောလေသွားတယ်။ တခြား လုပ်စရာ မရှိတော့ဘူးလား။ ပိုစ့်တွေ အားလုံးလည်း သူ့ဆီရောက်နေတယ်။ ကုဒ်ဒင်းကို တိုက်ရိုက် ထည့်ထားတယ် ထင်ပါရဲ့။ ကျွန်တှော့မှာ ဒီဘလှော့ခ်လေးရဖို့ အချိန်အကြာကြီး လုပ်လိုက်ရတာ။ ဘယ်လို စိတ်ကူးနဲ့ ဒါမျိုး လုပ်သလဲတော့ ကျွန်တှော မသိဘူးဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဒါက စှောကားခြင်း တစ်မျိုးပါပဲ။ ပြီးတော့ ကျွန်တှောယူသုံးထားတဲ့ ကုဒ်ဒင် တစ်ချို့အတွက် အနှောက်အယှက် ပေးရာကျသလို ပျက်လည်း ပျက်နိုင်ပါတယ်။ ထွန်းရဲအောင် ကျေးဇူးပြုပြီး အဲဒီဘလှော့ခ်ကို ချက်ခြင်း ဖျက်ပေးပါ။ ( http://tunyeaung.blogspot.com )
Check this Blog Here [Click]
Posted by NLS at 5/04/2006 11:11:00 AM0comments Links to this post
Source : famfamfam
Tags : Country Icon Set Download , Website
Posted by NLS at 5/04/2006 05:20:00 AM0comments Links to this post
နွေရက် တှောတှောများများရဲ့ ကျွန်တှော အိပ်စက်သော အချိန်တွေမှာ သူဟာ အိပ်မက်ထဲကို ရောက်လာခဲ့တယ်။ ဘာစကားမှ မဆိုပါဘူး။ သူ ကျွန်တှော့ကို ကြည့်တယ်။ ပြီးရင် တိုးတိတ် ညင်သာစွာပဲ ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားတတ်တယ်။ ကျွန်တှောလည်း သူဘာပြောမလဲ ဆိုတာ ငေးနေရင်း အိပ်မက်က နိုးသွားတတ်တယ်။ နိုးလာတဲ့အခါ ဘာလို့များ သူ့ကို စကားမပြောလိုက်ရတာလဲလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်တင်နေမိတယ်။ ကျွန်တှော ဒီတစ်ခါ သူနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ စကားပြောဖြစ်အောင် ပြောမယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ ဆုံးဖြတ်ထားလိုက်တယ်။ ကျွန်တှော သူ့ကို ဘာတွေ ပြောရမလဲ ဘာတွေမေးရမလဲ ဆိုပြီး ကျွန်တှော အမြဲ စဉ်းစားနေမိတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူကျွန်တှော့ အိပ်မက်ထဲကို ရောက်လာတာ မနေ့ကနဲ့ဆို ၈ ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီ။ သူဟာ အဖြူရောင် အကဿငျီ ကို ဝတ်လာတတ်တယ်။ ကျွန်တှော့ အိပ်မက်တွေက အိပ်မက်သာဆိုတယ် သိပ်ပြီး သဘာဝကျလွန်းတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင် အနေအထား၊ အခန်းထဲမှာ မီးရောင်ဖျော့ဖျော့ လင်းနေပုံ၊ လွင့်နေတဲ့ ခန်းဆီးစတွေ၊ လည်ပတ်နေတဲ့ မျက်နှာကျက်က ပန်ကာ၊ သူထိုင်သွားတဲ့ ကုလားထိုင်၊ သောက်လက်စ စီးကရက်တိုလေးကနေ ပျံ့လွင့်နေတဲ့ မီးခိုးငွေ့တွေ။ ကျွန်တှောက အိပ်မက်လို့တောင် မထင်မိဘူး။ သိပ်ကို သဘာဝကျလွန်းတယ်။
“မေမေ ကျွန်တှော့ဆီကို ညက သူလာသွားတယ်”
“အင်း မေမေလည်း သိမှာမဟုတ်ဘူး”
“မင်းသူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ မေမေမသိတဲ့လူများ ရှိနေသေးလို့လား”
“အင်း သူငယ်ချင်းတော့ သူငယ်ချင်းပဲ။ ကျွန်တှောနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး သိနေတယ်။ ဒါပေမယ့် အပြင်မှာ မဟုတ်ဘူး”
“ဟင်. ဒါဖြင့် ဘယ်သူလဲ”
“သူဘယ်သူလဲဆိုတာ ကျွန်တှော မသိဘူးမေမေ။ ဒါပေမယ့် သူ့မျက်လုံးတွေ အကြည့်တွေကို ကျွန်တှော သိပ်ရင်းနှီးတယ်။ ကျွန်တှော သူ့ကို သိတယ်နဲ့တူတယ်”
“ဟုတ်ပါတယ် မေမေရယ်။ သူ့ကို ကျွန်တှော မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို ကျွန်တှော သိနေတယ်။ ဒီနေ့လည်း သူလာဦးမှာပဲ။ ခဏနေကြရင် ကျွန်တှော အိပ်လိုက်ဦးမယ်။ အိပ်မက်ထဲမှာမှ သူကျွန်တှော့ဆီ လာလို့ရတယ်။ သူကျွန်တှော့ဆီက ဘာလိုချင်တာ ရှိလည်း ကျွန်တှော မသိဘူး။ သူစကားပြောချင်နေတာလည်း ကျွန်တှော သိတယ်။ ဒီနေ့တော့ ကျွန်တှော သူ့ကို စကားပြောမှ ဖြစ်မယ်”
“အင်း မေမေ မသိပါဘူး”
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တှောဟာ အခန်းတံခါးလေးကို ပိတ်ပြီး အိပ်ယာလေးထက်မှာ အိပ်စက်လိုက်တယ်။ ခေါင်းရင်းက တံခါးလေးကိုတော့ အနည်းငယ် ဟထားလိုက်တယ်။ တှောကြာ သူဝင်လို့ မရမှာ စိုးလို့ပါ။ ကျွန်တှော မအိပ်ခင် ဒီနေ့ သူနဲ့တွေ့ရင် ပြောရမယ့် စကားတွေကို ပြန်စဉ်းစားလိုက်တယ်။ အိုကေ ကျွန်တှော အဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့ပြီ။ သူဝင်လာဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ်။ အခန်းပြူတင်းဝလေးကနေ လေလေးတွေက တဖြူးဖြူးနဲ့ ဝင်နေတယ်။ နွေလေတွေ ဆိုတော့လည်း ပူသလိုလိုနဲ့အေး၊ အေးသလိုလိုနဲ့ ပူလို့နေတယ်။ တိုးတိုးလေး ဖွင့်ထားတဲ့ ကက်ဆက်လေးကနေ အိပ်၍မပျှောသော ညများ ဆိုတဲ့ သီချင်းသံလေးက ပျံ့လွင့်နေတယ်။ ကျွန်တှော အိပ်မပျှောသွားခင် ပြုံးလိုက်မိသေးတယ်။ ကျွန်တှောကတော့ အိပ်ပျှောတော့မယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တှော့မျက်နှာက အပြုံးမပျောက်ကွယ်သွားခင် ကျွန်တှော အိပ်ပျှောသွားတယ်။
ဒီခံစားမှုကို ကျွန်တှော သိနေတယ်။ ကျွန်တှော အိပ်မက်ထဲ ရောက်နေပြီ။ သူကျွန်တှော့ဘေးမှာ ရောက်နေပြီ။ သူကုလားထိုင်လေးမှာ ထိုင်လိုက်ပြီ။ သူကျွန်တှော့ကို ကြည့်နေပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တှော ထလိုက်တယ်။ အိပ်မက်ထဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုတင်ကြံစည်ထားတာမို့ ကျွန်တှောကတော့ အားလုံးကို သိနေတယ်။ သူက တစ်ချက် ပြုံးပြီး ကြည့်တယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကျွန်တှောသူ့ကို စကားပြောလိုက်တယ်။
“မဂဿငလာပါဗျာ ကျွန်တှော ခင်ဗျားကို စောင့်နေတာဗျ”
“အေးဗျာ ကျွန်တှော ခင်ဗျားကို သိနေတယ် ထင်တယ်”
သူက အသာအယာပြုံးရင်း ကျွန်တှော့ကို ကြည့်ပါတယ်။ ပြီးမှ “နေကောင်းလား” လို့မေးတယ်။
“ဪ ခင်ဗျား စကားပြောတယ်နှော။ ကျွန်တှောက ခင်ဗျား စကားမပြောမှာ စိုးရိမ်နေတာ”
“ဟုတ်လား.. ဒီလိုပဲ တစ်ခါတစ်လေလည်း အကြာကြီး စကားမပြောဖြစ်ဘူး”
“ခင်ဗျားကို ကျွန်တှော ရင်းနှီးလိုက်တာဗျာ။ ခင်ဗျား ဘယ်သူလဲ။ ကျွန်တှော့သူငယ်ချင်းလား သူငယ်ချင်း မဟုတ်ဘူးလား။ ခင်ဗျား ဘယ်ကလဲ။ ကျွန်တှော့ဆီမှာ ခင်ဗျားလိုချင်တာများ ရှိနေလား”
“မေးခွန်းတွေက များလိုက်တာရှင်။ အနှောက်အယှက်များ ဖြစ်သွားလို့လားဟင်”
“ဪ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ကျွန်တှော ခင်ဗျားလာတာကို ပျှောပါတယ်။ ကျွန်တှော တစိမ်းသူတွေနဲ့ မတွေ့ဖြစ်တာ တှောတှော ကြာနေပြီဗျ။ ခင်ဗျားက ပထမဆုံး ဧည့်သည်ပဲ”
“ဟုတ်လား.. ဒါနဲ့ ကှောဖီတစ်ခွက်လောက် သောက်လို့ ရမလား။ ရှင့်ရဲ့ ဗန့်ဂိုးကှောဖီဆိုတာ ခါးသက်သက်နဲ့ သောက်လို့ကောင်းတယ်လို့ ကျွန်မ ကြားတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွန်မကို တစ်ခွက်လောက် လက်ဆောင်အဖြစ် တိုက်ပါလားရှင်”
“မဟုတ်သေးဘူးနဲ့ တူတယ်ဗျ.. အခုကျွန်တှောတို့ တွေ့နေကြတာက အိပ်မက်ထဲမှာလေ.. ခင်ဗျား ကှောဖီကို ဘယ်လိုသောက်မှာလဲ”
“ဪ ရှင်က အိပ်မက်ကို မရှိတဲ့ နေရာတစ်ခုလို့ ထင်နေတာကိုး။ အိပ်မက်ဆိုတာ လူတွေ မမြင်ရတဲ့ နေရာတစ်ခုလို့ရော ရှင်မထင်မိဘူးလား ။ ကဲပါလေ ရှင်မယုံရင် ကျွန်မလက်ကို ကိုင်ကြည့်ပေါ့”
“နေပါစေဗျာ ကျွန်တှော သိပါတယ်။ အခုစကားပြောနေရတာ အစစ်လိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တှော အိပ်ပျှောသွား ခဲ့တာကိုလည်း ကျွန်တှော သိနေတယ်”
“ဪဟုတ်သားပဲ ခဏလေးဗျာ.. ကျွန်တှောဖြင့်အံ့ပါရဲ့၊ ခင်ဗျားမို့ ကျွန်တှော့ကှောဖီကို စိတ်ဝင်စားလေတယ်”
“ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်မက ဗန့်ဂိုးကို ကြိုက်တယ်ရှင့်၊ ပြီးတော့ ရှင့်အကြောင်းကိုလည်း သိထားလို့ပါ”
“ဗျာ ခင်ဗျားက ကျွန်တှော့ အကြောင်းကို သိတယ်..ဟုတ်လား။ ဒါဆို ခင်ဗျားက ကျွန်တှောနဲ့ သိတဲ့လူလား”
“အဲလိုတော့လည်း မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မ ရှင့်ကို တချိန်ချိန်က သိခဲ့တယ်နဲ့ တူတယ်.. စဉ်းစားလို့တော့ မရဘူး။ ကျွန်မ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာရော ရှင်သိလား”
“အေးဗျ ကျွန်တှောလည်း ခင်ဗျားကို အဲဒါ မေးချင်နေတာ.. ခင်ဗျားကို ကျွန်တှော ကောင်းကောင်းသိနေတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တှော ခင်ဗျားကို မသိဘူးဗျ။ မနေ့ကလည်း တစ်နေ့လုံး စဉ်းစားပြီးပြီ။ ခင်ဗျား မျက်နှာကို ကျွန်တှော သိပ်ရင်းနှီးနေတယ်။ ခင်ဗျား အကြည့်တွေကို ကျွန်တှော သိပ်ရင်းနှီးနေတယ်.. ကဲဟောဒီမှာ သောက်လိုက်ပါဦးဗျာ.. ခင်ဗျားကြိုက်မယ်ဆို ကျွန်တှောဖြင့် ဝမ်းသာမိမှာပဲ”
“အိုး.. သိပ်သေချာတာပေါ့ရှင် ကျွန်မ ကြိုက်မှာ အမှန်ပဲ”
“ဟောဒီမှာ အငွေ့တွေ ရှင်မြင်လား.. အိပ်မက်ထဲမှာဆို ဒီအငွေ့တွေ ရှင်မြင်ရမလား”
“ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တှော သတိထားမိတာ ကြာပြီ။ ဒါဟာ အိပ်မက် မဟုတ်ဘူးလို့။
ခင်ဗျား ဘယ်က လာသလဲ”
“အင်း ကျွန်မတို့နေရာက ရှင်တို့နေရာနဲ့ နီးနီးလေးမှာ”
“ဟင် ဒါဆို ဘာလို့ ခင်ဗျားကို ကျန်အချိန်တွေမှာ မမြင်ရသလဲ”
သူမက လက်ထဲက ကှောဖီခွက်ကို တရှိုက်မက်မက် သောက်လိုက်ရင်း
“ရှင် ရုပ်ရှင် ကြည့်ချင်ရင် ဘယ်ကို သွားရလည်း၊ ရုပ်ရှင်ရုံကို သွားရတယ် မဟုတ်လား”
“အင်း ကျွန်တှော သဘောပေါက်ပြီ .. ရုပ်ရှင်ရုံဟာ ကျွန်တှောတို့ အိမ်နဲ့ နီးနီးလေးပဲ။ ဒါပေမယ့် ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ လက်မှတ်ဝယ်ရတယ်.. ရုံထဲကို သွားရတယ်”
“အဲဒီလိုပဲပေါ့ရှင်.. အခုလည်း ရှင် ရုပ်ရှင်ရုံ တစ်ခုထဲ ရောက်နေတယ်လို့ မှတ်ထားလိုက်ပေါ့.. ဒီပွဲစဉ်အတွက် လက်မှတ်ကို ကှောဖီတစ်ခွက်နဲ့ ကျွန်မက ရှင့်ကို လက်ဆောင်ပေးတာပေါ့”
“လက်ဆောင်ဆိုလို့ ခုမှ သတိရတယ်။ ဒီနေ့က ကျွန်တှော့ မွေးနေ့ဗျ”
“အင်း ကျွန်မသိတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာ ရှင့်ကို စကားပြောဖြစ်တာ”
“အေးဗျာ ဝမ်းသာပါတယ်။ ကျွန်တှောက ပျင်းနေတာဗျ .. စကားပြောဖှော မရှိတာလည်း ကြာပြီ”
“ရှင်ဒီနေ့ ဘာလုပ်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိလည်း .. ကဗျာတွေ မရေးတော့ဘူးလား ရှင့်ကဗျာတွေ မဖတ်ရတာ ကြာပြီ”
“ရေးမလို့တော့ စဉ်းစားမိတယ်.. ဒါပေမယ့် မရေးဖြစ်တာ ကြာပြီဗျာ။ ဉာဏ်တွေလည်း ခေါင်းပါးကုန်ပြီ ထင်ပါရဲ့.. ဒါနဲ့ ခင်ဗျားက ကျွန်တှောကဗျာရေးတာ ဘယ်လိုလုပ် သိလဲ။ ဖတ်ဖူးလို့လား။ မဟုတ်သေးဘူး ခင်ဗျားကို ကျွန်တှော သိနေတယ်ဗျ. တစ်ယောက်ယောက်ပဲ၊ ခဏလေးဗျာ ကျွန်တှောလည်း ကှောဖီတစ်ခွက် သောက်လိုက်ဦးမယ်”
“ကျွန်မက မှောဒန်ကဗျာတွေ ကြိုက်တယ်ရှင့်”
“ဟုတ်လား ကျွန်တှော့ တစ်သက်မှာတော့ မှောဒန်ကဗျာ ကြိုက်တဲ့ မိန်းခလေး သူငယ်ချင်း များများစားစား မတွေ့ခဲ့ဖူးဘူးဗျ”
“မိန်းခလေး ??? ဟုတ်လား.. ကျွန်မက မိန်းခလေးလား??”
“ကျွန်တှောတို့ ဆီမှာဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားက မိန်းခလေးပဲဗျ.. နို့ မဟုတ်ဘူးလား??”
“ထားပါဗျာ..ဒါက အရေးမကြီးပါဘူး။ ခင်ဗျားအကြောင်း ပြောပြပါလား”
“ကျွန်မ အကြောင်းလား.. အင်း ရှင်သိချင်ရင် ပြောပြမယ်လေ။ ဒါပေမယ့် ရှင်ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြန်မပြောဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်..တကယ်လို့များ တစ်ယောက်ယောက်ကို ရှင်ပြန်ပြောပြမိလိုက်ရင် ပြန်ပြောတဲ့ နေ့ကစပြီး ရှင့်ဆီကို ကျွန်မ ဘယ်တော့မှ ပြန်လာတော့မှာ မဟုတ်ဘူး”
“ဟုတ်လား. ဒါဟာ ခြိမ်းခြောက်မှု တစ်ခုလား?? ကျွန်တှော့အတွက်တော့ ခင်ဗျား လာတာနဲ့ မလာတာနဲ့မှာ စကားပြောစရာ အဖှောတစ်ယောက် ရတာပဲ ထူးခြားပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျား မပြောစေချင်ဘူးဆိုရင် ကျွန်တှော မပြောပါဘူး”
“ကောင်းပါရဲ့ရှင်.. ဒါပေမယ့် ကျွန်မရောက်လာတာ ရှင့်အတွက် ဘာမှ မထူးခြားဘူးဆိုရင် ကျွန်မ ဝမ်းနည်းမိပါတယ်”
“ဒီလိုသဘောမျိုး ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ.. ကျွန်တှောက အရာတိုင်းကို တန်ဖိုးထားပါတယ်”
“ရှင် တန်ဖိုးဆိုတဲ့ စကားများ ပြောလိုက်သလား”
“ကျွန်မအကြောင်း မပြောခင် ရှင် တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတဲ့ အရာတွေကို ပြောပြပါလား”
“သိပ်ထူးထူး ထွေထွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပထမဆုံး ခင်ဗျား ဇန်ဆိုတဲ့ ဘာသာအကြောင်းသိလား”
Tags: Essay , NLS
Posted by NLS at 5/03/2006 09:30:00 PM0comments Links to this post